လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အသုံးပြုသောအပင်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်၏တိုးတက်မှုနှင့် Virility (2014) အတွက်အသုံးပြုပင်ပေါ်တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Nagendra Singh က Chauhan, 1, 2,* Vikas Sharma က, 1 VK Dixit, 1 နှင့် Mayank Thakur 1, 3,*
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလှုံ့ဆော်ဖို့နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခံစားမြှင့်တင်ရန်စက်ရုံသို့မဟုတ်စက်ရုံ-based ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုမှုလူသားမျိုးနွယ်ကိုယ်နှိုက်အဖြစ်နီးပါးကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်စက္ကူတက်ကြွစွာ, သဘာဝအခြေခံမူသုံးသပ်ပြီးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ရပြီဖြစ်သောအပင်၏ရေနံစိမ်းကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေအလားအလာရှိသည်, spermatogenesis နှင့်မျိုးပွားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။ အိန္ဒိယတွင်ရရှိနိုင်အီလက်ထရောနစ် databases ကိုများနှင့်ရိုးရာစာပေအတွက်ရရှိနိုင် refereed ဂျာနယ်များနှင့်သိပ္ပံနည်းကျစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကျယ်ကျယ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါအလုပျရိုးရာတောင်းဆိုမှုများ, elucidation နှင့်စုစုပေါင်း aphrodisiac အဖြစ်အပင်များ၏အသုံးပြုမှုအုပ်ချုပ်မယ့်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အယူအဆ၏အကဲဖြတ်နှင့်အတူသက်သေအထောက်အထားများ၏ဆက်စပ်မှုသုံးသပ်ပြီး။ လူသိများအဆောက်အဦများနှင့်အတူ Phytoconstituents သင့်လျော်သောဓာတုအုပ်စုများအတွက်ခွဲခြားထားသည်နှင့်တက်ကြွသောရေနံစိမ်းကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူစာရင်းပြုစုထားသောပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ pharmacological လှုပ်ရှားမှု, လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားနှင့်အဆိပ်အပေါ်ဒေတာကိုအစီရင်ခံရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏တိုးတက်မှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူသူတို့၏တက်ကြွမော်လီကျူး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါသည်။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးကအရေအတွက်အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ကလေးမွေးဖွားအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အတည်ပြုခဲ့ကြခြင်းနှင့်အသစ်သောဓာတု၏ဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အသုံးဝင်သောဦးဆောင်အဖြစ်ထို့ကြောင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုအရမျိုးပွားနိုင်သောစွမ်းရည်သည်မျိုးမပွားနိုင်သည့်စုံတွဲများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတွင်အားနည်းသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ဤဆယ်စုနှစ်အတွက်နောက်ထပ်ကိန်းဂဏန်းများကိုစောင့်ဆိုင်းရဆဲဖြစ်သော်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုများသောဘဝပုံစံသည်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ တစ် ဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုပုံစံသို့မဟုတ်အခြားကနေဘာသာရပ်ရဲ့ခံစားနေရပြီး၏။ အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်တွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့နည်းစေသောအဓိကအချက်များမှာမွေးရာပါ၊ ကိုယ်ခံအား၊ Oligozoospermia၊ လိင်နှင့်သန္ဓေတည်ခြင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်များစွာသောကိစ္စများတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းအတွက်နောက်ထပ်တာ ၀ န်ရှိသည်။1] ။ များစွာသောဒြပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများရရှိနိုင်ပါနှင့် / သို့မဟုတ်ဒီပြဿနာတွေကိုကုသရာတွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်ဖြစ်သော်လည်းဒီဆေးတွေများအတွက်အားနည်းချက်များအချို့သူတို့ကိုစျေးကြီးဖြစ်ခြင်းများနှင့်လည်းအလေးအနက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါသူတို့၏စွမ်းရည်များပါဝင်သည်, ထိရောက်သောကသဘာဝကုသဝယ်လိုအားနေဆဲထို့ကြောင့်ဖြစ်ကြသည်။ အပင်သို့မဟုတ်သဘာဝအလျောက်ထုတ်ကုန်များအများအပြားသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲသူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုကိုသက်သေပြဖို့တောင်းဆိုရင်တောင်သူတို့ထဲကအတော်များများတက်ကြွဖြစ်ကြပြီးသိပ္ပံနည်းကျဒေတာများကသက်သေပြဇီဝလှုပ်ရှားမှု, အပိုင်။ ထို့အပြင် [erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသအတွက်အသုံးဝင်သောဆေးဖက်ဝင်အပင်များအတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်သိပ္ပံနည်းကျစာပေစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုစာခေါငျးပါးသည်နှင့်အတိမ်အနက်အတွက် pharmacological အကဲဖြတ်များအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်2].
မော်လီကျူးအဆင့်ဆင့်မှာ erectile နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများ pharmacological အခြေခံများ၏နားလည်မှုအတွက်တိုးအရှင်ရွေးချယ်မှု aphrodisiac တ္ထုများအဘို့အရှာဖွေရေးဆင်းကျဉ်းမြောင်းမှကူညီပေးနေ, လိင်စိတ်နိုးထတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အရေးကြီးသည့်ဖြစ်စဉ်အချက်များသီးခြားဦးတည်ကျောက်ခဲတို့ကိုနင်းခံရဖို့ထွက်လှည့်နေသည်။ လူအတော်များများဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာဆေးသို့မဟုတ် aphrodisiacs ယုံကြည်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားမိန်းမတို့၏မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဂဏန်းရာစုနှစ်မှတဆင့်သူတို့ကိုနှိမ့်ချကိုသုံးခဲ့ကြ, သူတို့အသုံးပြုနေဆဲယနေ့ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေရှိပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များ၏စနစ်တကျအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စုစည်းယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်သေအထောက်အထား-based အသုံးချများအတွက်အခြေခံများကိုနိုင်ပေမယ့် aphrodisiac ၏အယူအဆကိုဦးတည်လာသံသယ, မတရားမှုဖွမဟုတ်ပါဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြရသောအမျိုးမျိုးသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များမူးယစ်ဆေးဝါး, ပေါ်ရရှိနိုင်သိပ္ပံနည်းကျသတင်းအချက်အလက် consummate ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုလည်းအာရုံကြော, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ဟော်မုန်း-မှီခိုယန္တရားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာမိမိတို့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့ကောက်ယူလူသိများအထောက်အထားများပါဝင်သည်။ အပင်တစ်အရေအတွက်ကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြခြင်းနှင့်အနည်းငယ်အခြားသူများကိုသာစာရင်းပြုစုထားသောနေကြသည်; ဒီအစီအစဉ်အဘို့အဓိကစံနှုန်းဆေးပညာ၏ Ayurvedic system ထဲမှာစက်ရုံ၏ ethnopharmacological ဆက်စပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီစက္ကူမှာဖော်ပြထားတဲ့အပင်များအတွက်အဆင့်စနစ်ကပါဝငျမသာ tabular form မှာစာရင်းအပင်အချို့လည်းမြင့်မားသောသိပ္ပံနည်းကျဆက်စပ်မှု၏ဖြစ်မည်အကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
2 ။ သမိုင်းနောက်ခံ
အဆိုပါစကားလုံး "Aphrodisiac" "အချစ်နဲ့" မေတ္တာများ၏ဂရိနတ်ဘုရားမကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ်ပါယျ aphrodisiacs အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ဂရိ-Aphrodisiakos-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ကိုလှုံ့ဆော်သောပစ္စည်းဥစ္စာ, [များမှာ3] ။ အပင်တစ်ဦးကအမျိုးမျိုး [အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများဆေးပညာရိုးရာစနစ်များအတွက်လိင်စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို Enhancer အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြ4-6] ။ Ayurveda ၏ Practitioner အိန္ဒိယတွင်ဆေးဝါးများ၏ရိုးရာ system ကို [virility နှင့်ရေးဆွဲပြီး Vajikarna ကုထုံး၏အရေးပါသောအအရေးပါမှုအသိအမှတ်ပြု7] (စားပွဲတင် 1) ။ ဟူသောဝေါဟာရကို "aphrodisiac" အတွက်ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကို concept ကိုအနီးကပ် Ayurvedic ဆေးပညာရိုးရာကျမ်းထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ Vajikarna အယူအဆယူဆနိုင်ပါသည်။
Vajikaran Rasayan အဖြစ် Ayurveda အစီရင်ခံစက်ရုံများစာရင်း။
3 ။ Ayurvedic စာသားထဲမှာ Vajikaran
တစ်ဦးအယူအဆအဖြစ် Vajikaran ထဲမှာသတ်မှတ်ထားသည် ရေနံတူးစင် Veda နှင့် Yajurveda, Ayurveda အတွက်ဆေးဝါး၏ပထမဦးဆုံးစာဖြင့်ရေးသားကျမ်း။ Vajikarana ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုလည်းအတွက်အကြံပြုကုထုံးများအတွက်အခြေခံများမှာ Kamasutra, စုံတွဲများအကြားသင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဘို့နည်းလမ်းများ defining တစ်ဦးကျမ်း။ ဤအခကျြမြားမှဆင်းသက်လာအဓိပ္ပါယ်တစ်ခုကောက်နုတ်ချက် [မှန်မှန် Vajikarana ဆေးတစ်လက်အချို့ကိုမျိုးယူပြီးသံကိုကျန်းမာရေးအတွက်လူငယ်ယခုနှစ်အပေါငျးတို့သရာသီကာလအတွင်းညစဉ်ညတိုင်းလူငယ်၏ကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့ခြင်းအလိုငှါအကြံပြု8] ။ ဟောငျးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အမြိုးသမီးမြား၏ချစ်ခင် secure လိုသောယောက်ျား, အဖြစ်အိုမင်းသောယိုယွင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ incapacity ခံစားနေရပြီးသူများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များလည်း Vajikaran ကုစားသုံးနိုင်ပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်အကျွံနှင့်အတူအားနည်း။ သူတို့ကချောမောနဲ့ခမ်းနားထည်ဝါလူငယ်အချို့နှင့်များစွာသောမယားတို့ကိုရတယ်ကြသူပုဂ္ဂိုလ်များမှမြင့်မားအကျိုးရှိသောဖြစ်ကြသည်။ Rasendra Sara Sangrah အဆိုအရတစ်ခု Ayurvedic စာသားကို Vajikaran ဆေးတစ်လက်မြင်း (Vaji) အဖြစ်လူတလိင်ကဲ့သို့ခိုင်မာသောကိုရွှင်ပြလန်းဆန်းအပူနှင့်လူငယ်အပျို၏ Amore ardours (ကျေနပ်အောင်သူ့ကိုဖွပုံ 1) [9, 10] ။ သိပ္ပံနည်းကျအသုံးအနှုန်းများတွင်ဤတောင်းဆိုမှုများတစ်လူဦးရေအလားအလာကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါသော်လည်း, ဆေးပညာ၏ Ayurvedic စနစ် Vajikaran ၏လူကြိုက်များမည်သို့ပင်ဆိုစေမြောက်မြားစွာတောင်းဆိုမှုများနှင့်လူ့သမိုင်း၏သင်တန်းကာလအတွင်းသူတို့ကိုဖန်ဆင်းစာသားကိုးကားနှင့်အတူ undisputed ဖြစ်ပါတယ်။
Vajikaran Rasayana ၏လှုပ်ရှားမှု။
4 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Functions များ: An Ayurvedic ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
တစ်ဦးကတစ်ဦးယောက်ျား၏စိတ်တွင်စာမျက်နှာ၏ခါးသောအတှေးအများမြင့်တက်လာမှမရှိစေရန်အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ချုပ်ရာ, သို့မဟုတ် (လုံလုံလောက်လောက်သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှိုးဆျောဝံ့ဖို့ပျက်ကွက်သူ) တစ်ဦးလွဲမိန်းမနှင့်တစ်အတင်းအဓမ္မလိင်ဆက်ဆံတစ်ခုဥပမာအားဖြင့်သရုပ်ဖော် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ျခြို၏။
ခ၏ဆောင်းပါးများကိုအောင်အနံ့, အက်ဆစ်, ဒါမှမဟုတ်ဆားအရသာ၏, ဒါမှမဟုတ်အပူ၏ဆောင်းပါးအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုသက်ရှိများ၏ Saumya Dhatu (ကြဲကြဲနိယာမ) ၏ဆုံးရှုံးမှုစေပါတယ်။ ဒါဟာသင်ျခြို၏အခြားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် aphrodisiac ဆေးတစ်လက်မသုံးဘဲအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးစွဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သုတ်ရည်၏အရှုံးကနေရရှိလာတဲ့ Virile သင်ျခြိုပု virile သင်ျခြို၏အရည်အချင်းကိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
(စသည်တို့ကိုဆစ်ဖလစ်), ယောက်ျားကို General ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုတစ်နှစ်ရှည်လများရောဂါသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော spermatic ကြိုးအဖြစ်ဒေသခံတစ်ဦး Marma ၏ပျက်စီးခြင်းကိုလုံးဝ coition ၏တန်ခိုးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။
အလွန်မွေးဖွားထံမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ incapacity ဟာမွေးရာပါ (Sahaja) သင်ျခြိုဟုချေါသညျ။
စုံလင်သောတိုက်ကြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့လူသို့မဟုတ်ပြင်စျြလြူရှုမှုမှတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ဆန္ဒအလျောက်ဖိနှိပ်မှုအတွက် spermatic အရည်တစ်ခိုင်မာသောထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် virile ခွန်အားမရှိခြင်း၏ဆဌမပုံစံများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ျခြို၏ခြောက်လအထက်ပါအမျိုးအစားများကြောင့်မဆိုဒေသခံ Marma (spermatic ကြိုး) ၏ပျက်စီးခြင်းအဖို့မွေးရာပါပုံစံအဖြစ်တဦးတည်းပျောက်ခဲ, ကြွင်းသောအရာဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမူရင်း Antidote သည့်အစီအမံများနှင့်ကုစားဖို့ curable နှင့်အာမင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်မှတ်ယူသင့် အကြောင်းတရားများ .
5 ။ Ayurveda နှင့် Aphrodisiacs ၏ Concept ကို
ရိုးရာ Ayurvedic ကျမ်းအနည်းငယ်အပင် [သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုထုံးလူတန်းစားအသီးအသီးမျိုးကိုများအတွက်ရည်ညွှန်းချက်များအဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့ကြအောက်ပါငါးအမျိုးအစားထဲမှာ aphrodisiac ခွဲခြား3].
သုတ်ရည်၏အရေအတွက်တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်ဥပမာအားသုတ်ရည်များထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောမူးယစ်ဆေးဝါး, Microstylis wallichii, Roscoea procera, Polygonatum verticillatum, Mucuna pruriensနှင့် ကညွတ် racemosus.
သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ဥပမာသုတ်ရည်၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရာမူးယစ်ဆေးဝါး, Saussurea lappa, Myrica နက်ဂျီ Sesamum indicum, Vetiveria zizanioidesနှင့် Anthocephalus cadamba.
ဥပမာအား ejaculatory လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်စေရာမူးယစ်ဆေးဝါး, Strychnos nux vomica, ဆေးခြောက် sativa, Myristica fragransနှင့် သစ်ကြံပိုးတမျိုး occidentalis.
မူးယစ်ဆေးဝါးသုတ်ရည်လွှတ်၏အချိန် delay လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥပမာ ejaculatory စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်, SIDA cordifolia, ကညွတ် racemosus, Cinnamomum tamala, Anacyclus pyrethrum, Mucuna pruriens နှင့်ဆေးခြောက် sativum.
အမည်ရ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှိုးဆွသောမူးယစ်ဆေးဝါး, Withania somnifera, ကညွတ် racemosus, Datura stramonium, Anacyclus pyrethrum, hibiscus abelmoschusနှင့် ဘိန်းဘုရင် The Opium.
Vajikarana ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက် Ayurvedic အခြေခံဆွေးနွေးတင်ပြပြီးမှ, ဒါကြောင့်ခေတ်သစ်ဆေးဝါးဗေဒနဲ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုသို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
6 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ယန္တရား: ခေတ်သစ်အမြင်
လိင်စိတ်နိုးထ၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုနှစ်ခုလုံး preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအတွက်အထောက်အထားများအနေဖြင့်အဓိကအားထားရာတစ်ဦးထက်ပို Lucid အခြေခံ, ရှာတွေ့သည်။ လိင်စိတ်နိုးထ, (အာရုံခံခြင်းနှင့်သိမြင်မှု) အာရုံကြောအပေါ်မှီခိုဟော်မုန်းများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအချက်များအပြင် Ayurveda တွင်လည်းသတ်မှတ်ထားသောအရာတစ်ခုခုဒါပေမဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှဆိုင်တဲ့ဟာသိပ္ပံနည်းကျဘာသာစကားကိုသုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
7 ။ ဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurochemical အခြေခံ
တတ်နိုင်သမျှဖြစ်စေလုပ်ရပ်ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (ဦးနှောက်) အပေါ်နှင့် / သို့မဟုတ်ရံအာရုံကြောစနစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မူးယစ်ဆေးဝါး။ ဦးနှောက်နှင့်ယူဆရလိင်စင်တာများထိခိုက်မူးယစ်ဆေးဝါးယေဘုယျအားဖြင့်လိင်စိတ်နိုးထတစ်ခုတိုးလာသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူစွပ်စွဲနေကြသည်။ အရံအာရုံကြောကိုထိခိုက်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ရိုက် arousal ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအရေးယူတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်လိင်စိတ်နိုးထသို့မဟုတ် function ကိုအုပ်ချုပ်သောအာရုံခံ၏ဓာတုအပြောင်းအလဲတချို့, ပါဝငျသညျ။ တနည်းအားဖြင့်အချို့သောဆေးဝါးများမအင်္ဂါမှသွေးစီးဆင်းမှုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သွယ်ဝိုက်ပြုမူလိမ့်မည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ neurochemical အခြေခံကိုရည်မှတ်အများစုမှာယူဆချက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာကြသည်, သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်ထောက်ခံမှုလက်တွေ့လေ့လာမှုများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ငါးကိုအဓိက neurochemically ကွဲပြားစနစ်များကိုလိင်စိတ်နိုးထတိုးပွားလာမှုအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ထင်နေကြသည်။ အဆိုပါက transmitter norepinephrine, dopamine, serotonin, acetylcholine နှင့် histamine [ပါဝင်သည်12] ။ ဆုံးကျယ်ပြန့်ထောက်ခံယူဆချက် serotonin နဲ့ dopamine နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦး inhibitory အခန်းကဏ္ဍကစား serotonin နဲ့ dopamine တစ်ခု excitatory အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ neurochemical ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Dopamine [ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ13] ။ အလယ်ပိုင်း dopaminergic စနစ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်တိုး [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်14]. Vivo အတွက် သတိအထီးကြွက်များတွင် microdialysis, အ striatum အတွက်သိသိသာသာကြောင်း dopamine ဂီယာတိုးထင်ရှားနျူကလိယ accumbens နှင့်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း preoptic ဧရိယာ medial [15-17] ။ အလယ်ပိုင်း neurotransmission အတွက်ဤပြောင်းလဲမှု penile စိုက်ထူအပါအဝင်မော်တာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုစီးရီးမှအလိုလိုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအစ [တိုက်ရိုက် penile စိုက်ထူ၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်အရေးပါများ၏လှုပ်ရှားမှု modulate စေခြင်းငှါ18] ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဦး နှောက်ထဲတွင် dopamine ပမာဏတိုးမြှင့်ပေးသော levodopa ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောပုံမှန်မဟုတ်သော dopamine လှုပ်ရှားမှုများကိုခံစားနေရသောလူနာများတွင် libido တိုးပွားလာခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် haloperidol ကဲ့သို့သော dopamine လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့စေသောဆေးဝါးများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ monoamines များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားထိန်းညှိရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နေသည်ဟုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသံသယရှိခဲ့ကြပြီးအထူးသဖြင့် dopaminergic ဂီလ်ပြန့်ပွားမှုအားပုလ်လှုပ်ရှားမှုအားပံ့ပိုးပေးသော dopaminergic နှင့် adrenergic receptors များပါ ၀ င်သည်။ Yohimbine, bromocriptine နှင့် reserpine တို့သည် alpha-adrenergic receptor ကို block လုပ်သောအေးဂျင့်များဖြစ်သော်လည်း yohimbine, bromocriptine, amphetamine နှင့် apomorphine အားလုံးသည် neurotransmitter dopamine နှင့်အတူအမြှေးပါးက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဆက်သွယ်သည်။19] ။ ထို့အပြင်အချို့လေ့လာမှုများ dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုလည်း hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းတိုးမြှင့်နှင့်ဤ hypothalamic နျူကလိယ dopamine အတွက် penile ထိန်းချုပ် oxytocin အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက် NO ထုတ်လုပ်မှုကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုခဲ့ကြ စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, အရာစီမံကိန်းကို extrahypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်ကျောရိုးမှ [13, 20-24] ။ ထို့ကြောင့်, dopamine နဲ့နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အကြားကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံအဆင့်ဆင့်မှာလက်ဝါးကပ်တိုင်ဟောပြောပွဲတွေအများကြီးရှိပုံပေါ်; ဒီလာမယ့်အပိုင်းအတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
8 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-အခြေခံပြီးယန္တရား
နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် (NO) တစ်ဦးအလယ်တန်းတမန် / neurotransmitter အဖြစ်ကို dual အခန်းကဏ္ဍရှိခြင်းတစ်ခု atypical စည်းမျဉ်းမော်လီကျူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ [ကွဲပြားခြားနားဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး22] ။ တွေ့ရှိချက်များကိုယခုအချိန်အထိ [NO ကိုလည်းအဓိကအာရုံခံတမန်ဖြစ်မည်အကြောင်းညွှန်ပြ23] ။ အထူးသဖြင့်, က [penile စိုက်ထူတစ်ခုထူထောင်ဇီဝကမ္မအာမခံ24] နှင့်ဦးနှောက်အတွက်, NO synthase မြင့်မား [အဆောက်အဦကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက် (olfactory မီးသီး, supraoptic နှင့် paraventricular အရေးပါ, amygdala, septal အဆောက်အဦများ, etc) အတွက်အာရုံစိုက်နေသည်25].
မကြာမီကလေ့လာမှုများ [penile စိုက်ထူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော, NO penile vasculature နှင့် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားများအပန်းဖြေမှုအတွက်အဓိကဇီဝကမ္မလှုံ့ဆော်မှုကြောင်းအကြံပြု26] ။ အဆိုပါ Corpus cavernosa ၏ trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားများအပန်းဖြေလိင်တံတစ်လျော့နည်းသွားသွေးကြောခုခံနှင့်တိုးမြှင့်သွေးစီးဆင်းမှုစေပါတယ်။ တိုးမြှင့စီးဆင်းမှုအတူ, သွေးပြန်ကြောထွက်သွားသည့် subtunical venules ၏ချုံ့ခြင်းဖြင့်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတိုးမြှင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်၏ပေါင်းစပ်နှင့်ထွက်သွားလျော့နည်းသွား penile engorgement နှင့်စိုက်ထူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါ sinusoids ၏သွေးကြော endothelium ကနေနှင့် nonadrenergic, noncholinergic နှင့် cavernosal အာရုံကြောကနေ NO [သည့် vasodilatation ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပေါ်လာသော27, 28] ။ အသစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုမူးယစ်ဆေးနှင့် NO ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို penile vasculature အတွက် cGMP နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အဆုံးသတ်သောတိကျသောအင်ဇိုင်း phosphodiesterase-V ကိုဟန့်တားသဖြင့် NO ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု potentiating အားဖြင့် sildenafil လုပ်ရပ်များ  ။ ဤအဟင်းသီးဟင်းရွက်မှဆင်းသက်လာအတော်များများဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး NO အချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂျင်ဆင်း (ginsenosides) ကနေ saponins erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားနေရပြီးလူများ၏ကုသမှုများအတွက်, အရှင် (သွေးကြော (ဖြစ်ကောင်းဂျင်ဆင်း၏ antifatigue နှင့်သွေးဖိအား-လျှော့ချသက်ရောက်မှုမှပံ့ပိုး) နှင့် Corpus cavernosum အပန်းဖြေပြပြီသို့သော် ဂျင်ဆင်းရဲ့ဒဏ္ဍာရီ aphrodisiac အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခြဲ့ဖြစ်နိုင်သည်) .
9 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အန်ဒရိုဂျင်-အခြေခံပြီးယန္တရား
အန်ဒရိုဂျင်တစ်ဦးအလွန်အရေးပါထိုကဲ့သို့သော epididymis အဖြစ်အလယ်တန်းအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍ, vas deferens, ဟောပြောမှုတွေတွေ့နေကျမဟုတ်သော, ဆီးကျိတ်နှင့်လိင်တံကစား။ ထို့အပြင်အန်ဒရိုဂျင် [အပျိုဖော်ဝင်, အထီးကလေးမွေးဖွားနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအဘို့အလိုရှိပါသည်29] ။ testosterone ဝှေးစေ့များကလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ကျောင်းအုပ်အန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone ဟော်မုန်း (LH) luteinizing ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွခြင်း, ဝှေးစေ့၏ Leydig ဆဲလ်တွေအတွက်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ ဝှေးစေ့အတွင်း testosterone ဟော်မုန်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီးသက်ရောက်မှုတစ်ခုမှာ seminiferous tubules အတွက် spermatogenesis ၏ဆွဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ testosterone- သို့မဟုတ် dihydrotestosterone-receptor ရှုပ်ထွေးလာမယ့်နျူကလီးယားအမြှေးပါးဖြတ်သန်းသွားသည်, DNA ကိုမှချည်နှောင်နှင့်အသစ်သော mRNA ပေါင်းစပ်နှင့်အားဖြင့်သစ်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်။ လိင်စိတ်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ hypothalamus အတွက် estradiol မှ testosterone ဟော်မုန်း၏ပြောင်းလဲခြင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ testosterone ဟော်မုန်းကြွက်သား, အရိုး, နှင့် erythron အပေါ်သက်ရောက်မှုမထွက်ရယန္တရားများ [ကြိုတင်မော်လီကျူးပြောင်းလဲခြင်းကိုလိုအပ်မှပေါ်လာပါဘူး30].
အမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကုသရန်ဖို့အသုံးပြုမူးယစ်ဆေးဝါး, facilitatory inhibitory, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရာ neurotransmitters ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ကိုတွေ့နေကြပါတယ်။ အန်ဒရိုဂျင်ကဦးနှောက်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ NO ထုတ်လုပ်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများကြသည် [31, 32] ။ NO အများအပြားဟာဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသောအင်ဇိုင်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (NOS) ကိုအားဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။ တစ်ဦး neurotransmitter နှင့် NOS အဖြစ် NO function ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းညှိသောဦးနှောက်၏ဒေသများတွင်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်  ။ စိတ်ဝင်စားစရာ castrated အထီးကြွက်မှ testosterone ဟော်မုန်း၏အုပ်ချုပ်မှု [NO ပေါင်းစပ်တစ်ခုတိုးလာကိုညွှန်းသည် mPOA အတွက် NO synthase-label တပ်ထားသောအာရုံခံ၏နံပါတ်တိုးပွါး34] ။ NO အလှည့်အတွက် penile စိုက်ထူလှုံ့ဆော်သော mPOA အတွက် dopamine (DA) ဖြန့်ချိလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ယန္တရားအန်ဒရိုဂျင်လိင်စိတ်နိုးထလှုံ့ဆော်သောတလမ်းတည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ .
10 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Functions များအပေါ်သက်တမ်းရှိသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအနည်းငယ်ဆေး
ပစ္စုပ္ပန်အပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းအဖြစ်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်မှုဂုဏ်သတင်းရှိသောများစွာသောကောင်းစွာ-စမ်းသပ်ပြီး Ayurvedic နှင့်အခြားရိုးရာဟင်းသီးဟင်းရွက်, အနည်းငယ်ဆွေးနွေးရန်မယ်လို့နှင့်အထူးသဖြင့်အမှု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကလေးမွေးဖွားတိုးတက်အောင်များအတွက်မြောက်မြားစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြရာ ယောက်ျား၏။ အပြင်ကဤဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေအပင်အမြောက်အများလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်မျိုးပွားမှု parameters တွေကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်အကဲဖြတ်ပြီ, ဤဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်များနှင့်အမည်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် စားပွဲတင် 2။ အတော်များများကသုတေသီများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်တက်ကြွစွာ bioconstituent ပစ္စုပ္ပန်စုံစမ်းစစ်ဆေး spermatogenesis နှင့်မျိုးပွားမှု parameters တွေကိုအခြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းရှိသည်ဟုစားပွဲတင် 3).
aphrodisiac အဖြစ်အသုံးပြုခံနေရမှုအတွက် ehtnopharmacological ကျောထောက်နောက်ခံနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောလူကြိုက်များဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အနည်းငယ်စာရင်းတစ်ခု။ စားပွဲကိုလည်းသူတို့ထံမှအထီးကျန်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလုပ်ဆောင်ချက်၏ဖြစ်နိုင်သောယန္တရားဖော်ပြသည်။
သိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်များနှင့်အရင်းအမြစ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူတက်ကြွစွာ consitutent တချို့၏တစ်ဦးက tabular ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။
10.1 ။ Butea superba
Butea superba Roxb (Leguminosae) လေ့ထိုင်းရွက်ကြွေသစ်တောများအတွင်းတွေ့ရှိရနှင့်ပြည်တွင်းအမည်အားရှိပါတယ် "ဟုနီ Kwao Krua ။ " ဒီစက်ရုံဥရှည်လျားအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသန်စွမ်း၏မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်တစ်ဦးရိုးရာဆေးဝါးအဖြစ်စားသုံးခဲ့ကြသည်။ ခ superba အရက်ထုတ်ယူ (0.01, 0.1 သို့မဟုတ် 1.06လအတွင်းကုသမှုများအတွက်) မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် BW / နေ့သိသိသာသာသုက်ပိုးအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာနှင့်အချိန်နှင့်အတူလျော့နည်းသွား Motilal နှောင့်နှေး။ သုက်ပိုးကွဲလွဲချက်များနှင့် testicular ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏နိမိတ်လက္ခဏာအဘယ်သူမျှမကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်ခဲ့ကြသည်  ။ ၏ Subchronic ကုသမှု ခ superba မြင့်မားသောဆေးများမှာဥအမှုန့်ရပ်ဆိုင်းမှု (200 အထီးကြွက်များတွင်) / ကီလိုဂရမ်မီလီဂရမ်သည်အသွေးဓာတုဗေဒ, သွေးရောဂါ, အသွေး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်အထိဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများပြသ။ 2, 25, 250 နှင့် 1250 ၏ဆေးများမှာ Powdered ရေနံစိမ်းမူးယစ်ဆေး mg / kg ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 8 ပတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်; တစ်ခုတိုးလာ testis အလေးချိန်နှင့်သုက်ပိုးအရေအတွက်ကြွက်များတွင်ရှိ၏။ သွေးအဖြစ်အားလုံးကုသအုပ်စုများ၏အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ် function ကို [ထိန်းချုပ်မှုကနေအဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်ပြသ37] ။ တစ်ဦးကထိုး-မှီခိုသာအသှေးကို testosterone ဟော်မုန်း၏ကျဆင်းခြင်း, ဒါပေမယ့်မရ LH, စက်ရုံအမှုန့်မြင့်မားဆေးများနဲ့ကုသသည့်ကြွက်များတွင်ထိန်းချုပ်မှုကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအနည်းဆုံးမြင့်မားဆေးများတို့၏စားသုံးမှု 90 ရက်အကြာမှာ, testosterone ဟော်မုန်းပြတ်တောက်သိသာကြောင်းအကြံပြု ခ superba အမှုန့်  ။ ၏အီသနောထုတ်ယူ ခ superba penile စိုက်ထူတိုးမြှင့်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအီသနောထုတ်ယူ intracavernous ဖိအား (ICP) တိုးမြှင့် Vivo အတွက်။ ဒါဟာအစသိသိသာသာ cGMP နှင့် isobutylmethylxanthine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမြှင့်တင်ရန်။ ဒီအကြောင်းအကြံပြု ခ superba Camp / cGMP လမ်းကြောင်းမှတဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ .
လက်တွေ့လေ့လာရေး။ အဆိုပါစက်ရုံအမှုန့် [ယောက်ျားအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်လူသားတစ်ဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအတွက်အလားအလာရှိသောလှုပ်ရှားမှုပြသ40].
10.2 ။ Curculigo orchioides
Curculigo orchioides ထို့အပြင် Kali Musli သို့မဟုတ် Syah (အနက်ရောင်) Musli အဖြစ်လူသိများ Gaertn (Amaryllidaceae), [aphrodisiac နှင့် Rasayan သို့မဟုတ် rejuvenation အဖြစ်စဉ်းစားသည်41] ။ ကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျ၏အီသနောထုတ်ယူအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးတက်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သော penile စိုက်ထူ, မိတ်လိုက်စွမ်းဆောင်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်တိမ်းညွတ်အပြုအမူအဖြစ် parameters များကိုအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအသံထှကျဟိုနှင့် spermatogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၏အလေးချိန်အကျိုးအမြတ်အားဖြင့်သက်သေခံခဲ့ရသည်။ တောင်ပေါ်မှာ latency ၏လျှော့ချရေးတွင်ထင်ဟပ်အဖြစ်ကုသမှုကိုလည်းသိသိသာသာ, တောင်ပေါ်မှာအကြိမ်ရေနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဦးတည်တိုးမြှင့်ဆွဲဆောင်တစ်ခုတိုးတိရစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိခိုက်ခဲ့သည်။ penile စိုက်ထူအညွှန်းကိန်းလည်း [ကုသအုပ်စုအဆတိုးခဲ့သည်42, 43] ။ ၏ lyophilized aqueous ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ Curculigo orchioides သိသိသာသာကုသမှု 14 ရက်အကြာမှာအထီးကြွက်များတွင် pendiculatory လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်လာသည်။ အလားတူပဲ, ထုတ်ယူကိုလည်းထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ စသည်တို့အတွက် 30 ပြီးနောက်အုပ်စုတစ်စုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသုက်ပိုးရေတွက် မိ။ ပေါက်ဖွား [၏44] ။ စက်ရုံ၏ aqueous ထုတ်ယူ 200 တစ်ထိုးအဆင့်မှာထင်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုပြသ mg / kg ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သိသာဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအလေးချိန်ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးအမြတ်နှင့်မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါများကသက်သေခံခဲ့ရသည်။ တောင်ပေါ်မှာ latency ၏လျှော့ချရေး, သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်, postejaculatory အောင်းနေချိန်, intromission အောင်းနေချိန်နှင့်တောင်ပေါ်မှာအကြိမ်ရေတစ်ခုတိုးလာသဖြင့်ထင်ဟပ်အဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ penile စိုက်ထူလည်းသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ လျှော့ချမဆိုင်းမတွအချိန် (ကုသကြွက်များတွင်အမျိုးသမီးဦးတည်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုညွှန်ပြချက်) ကိုလည်းထုတ်ယူကုသတိရစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တိုးတက်မှုညွှန်ပြ  ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမှု၌၎င်း, testicular function ကိုမှထိခိုက်ပျက်စီးသွေးဆောင်အပူဖြစ်ပါသည်, စက်ရုံတွေလျှော့ spermatogenesis ameliorating အတွက်အသုံးဝင်သောကြီးနှင့်ကုသတိရိစ္ဆာန်များထိထိရောက်ရောက်အပူစျေးမှာပရိုတိန်းကိုကျော်လွှားနိုင်ပါ, ဒီ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပုံအော C. orchioides testicular ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကျော်လွှားအတွက် .
10.3 ။ Cynomorium coccineum
Cynomorium coccineum လင်း။ (Cynomoraceae) လိုရိုဖီးလ်ကငျးမဲ့တဲ့အနက်ရောင် leafless ကပ်ပါးစက်ရုံဖြစ်သောဆော်ဒီအာရေဗျ Som-El-Ferakh အဖြစ်လူသိများသည်။ ကာတာနိုင်ငံအတွက်ကတစ်ဦးလုပ်သူများနှင့် aphrodisiac [အဖြစ် (အဓိကအားဖြင့်ပျားရည်နှင့်အတူ) အသုံးပြုရန်47] ။ ၏ aqueous ထုတ်ယူ Cynomorium coccineum ယင်းသုက်ပိုးအရေအတွက်သိသိသာသာတိုးသွေးဆောင်ခြင်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသုက်ပိုးများ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်၎င်းတို့၏ Motilal တိုးတက်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသုက်ပိုးများ၏အရေအတွက်ကလျော့သွားသည်။ Testicular တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ် [အတည်းကကုသမှုမရှိဘူးထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမို spermatogenesis နှင့်ကုသအုပ်စုတွင်သုက်ပိုးများ၏အပြည့်အဝ seminiferous tubules ပြသ48] ။ စက်ရုံ၏ aqueous ထုတ်ယူနုကြွက်များတွင်ထူးဆန်းသော spermatogenesis ရူးနှမ်း။ ဟော်မုန်းပမာဏလှုံ့ဆော် interstial ဆဲလ်ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သော်လည်းသွေးရည်ကြည် Testosterone နဲ့ FSH အဆင့်ဆင့် [ထိန်းချုပ်မှုထက်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူနဲ့ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြ49].
10.4 ။ Chlorophytum borivilianum
Safe Musli (Chlorophytum borivilianum) aphrodisiac နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်အဖြစ် Folklore တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူမိသားစု Liliaceae ပိုင်ဆိုင်  ။ အမြစ်ကနေခွဲထုတ်အီသနောအမြစ်များထုတ်ယူအဖြစ် sapogenins albino ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် spermatogenesis အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့ကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ကုသမှုအလေးချိန်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အကျိုးအမြတ်နှင့်မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါများကသက်သေ, ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဟိုနှင့် spermatogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုအသံထွက်ခဲ့သည်။ သိသိသာသာတိရစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိခိုက်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ၏အုပ်ချုပ်ရေးတောင်ပေါ်မှာသုတ်ရည်လွှတ်၏လျှော့ချရေး, postejaculatory နှင့် intromission အောင်းနေချိန်တွင်ထင်ဟပ်။ အမျိုးသမီးဆီသို့ဦးတည်တစ်ခုတောင်ပေါ်မှာအကြိမ်ရေအတွက်တိုးခြင်းနှင့်ကိုဆွဲဆောင် [လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်51] ။ ၏အခြောက်လှန်းအမြစ်များ၏ aqueous ထုတ်ယူ Chlorophytum borivilianum Wistar ကြွက်များတွင်လိင်စိတ်နိုးထ, သန်စွမ်းခြင်း, လိင်စိတ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ယူသိသိသာသာသုက်ပိုးအရေအတွက်တိုးပွါး [44, 52].
streptozotocin နှင့် alloxan သွေးဆောင် hyperglycemia ၏အမှု၌, စက်ရုံအနေဖြင့် aqueous ထုတ်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ amelioration မှု, ဆီးချိုထိန်းချုပ်ရေးကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးတက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရလဒ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုအရှင်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမူးယစ်ဆေးဝါးများသာမန်အဖြစ်ဆီးချိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်ပြုမူစေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားပေး [53, 54].
10.5 ။ Epimedium koreanum
ရိုးရာတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်, Epimedium အယ်လ် (Berberidaceae), ကနျြးမာရေးလုပ်သူများအဖြစ်အသုံးပြုမယ့်ပေါ်ပြူလာရုက္ခဗေဒဖြည့်စွက်သည်။ အရေးအပါဆုံး Epimedium ဆေးဖက်ဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုမျိုးစိတ်များမှာ အီး koreanum Nakai, အီး pubescens လုပျသငျ။ , အီး brevicornum လုပျသငျ, အီး sagittatum (Sieb ။ Et Zucc) အလုပျသနှင့် အီး wushanense TS Ying ကဒုတိယ  ။ အပင်၏ Hydroalcholic ထုတ်ယူ [aphrodisiac သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်မှတ်ခြင်းနှင့်လေ့ erectile function ကိုမြှင့်တင်ရန်တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာအသုံးပြုကြသည်56] ။ ဒါဟာ icariin ၏မူလတန်းတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်းထင်နေသည် Epimedium ကောက်နုတ်ချက်များ။ Icariin သည် flavonol တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒါဟာ eempile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် kaempferide 3,7-O-diglycoside, icariin ၏ prenylacetylation သည်နှင့် phosphodiesterase-5 (PDE5) အပေါ်၎င်း၏ဆေးထိုး - မှီခိုရွေးချယ် inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၄ ပတ်ကြာ icariin (> 98.6% purity) ဖြင့်ခံတွင်းကုသမှုသည် erectile function ကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြွက်သားများတိုးလာခြင်းနှင့်ကြွက်များ၏ corpus cavernosum တွင် NO synthase isoforms များဖော်ပြခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဤရလဒ်သည် icariin သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်ကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။57] ။ Icariin သုံးခုစလုံး PDE5 isoforms ရန်နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် zaprinast အဘို့အများထက်သုံးကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြရသောအလားတူ IC50 တန်ဖိုးများနှင့်အတူ inhibitory ဖြစ်ခဲ့သည်။ Icariin [ဆိုဒီယမ် nitroprusside-ကုသလိုဏ်ဂူချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်များတွင်သိသိ guanosine monophosphate ၏အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ခဲ့သည်58-60] နှင့် bioactive နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်  အဖြစ် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုန်းမှာ .
10.6 ။ Eurycoma longifolia
Eurycoma longifolia Tongkat လီအဖြစ်ဒေသအလိုက်လူသိများဂျက် (Simaroubaceace), လေ့မြေနိမ့်သစ်တောတွေထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အများအား [မြောက်မြားစွာအကြောင်းပြချက်များအတွက်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကအသုံးပြုများနှင့်မလေးရှားကနေအဓိကတင်ပို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်63]. အီး longifolia လိင်နုံအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ လျှပ်စစ်ဇယားကွက်ဟာနဲ့ကုသနှစ်ခုလုံးအတွက်ဘယ်လောက်အနေနဲ့ဆန္ဒရှိနှိုးဆွဟာလိင်ကနုံအထီးကြွက်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်လျှပ်စစ်သုတ်ရည်ထိလှောင်အိမ်ထဲမှာတစ်ခုအဆီးအတားအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် အီး longifolia နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများပန်းတိုင်လှောင်အိမ်ထဲမှာ estrous လက်ခံအမျိုးသမီးရောက်ရှိဖို့ကျော်လွှားရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဇယားကွက်မှာလက်ရှိများ၏ပြင်းထန်မှု 0.12 မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် MA နှင့်ဤထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်ယောက်ျားကြွက်ပန်းတိုင်လှောင်အိမ်ရောက်ရှိဖို့ crossover ရန်ပျက်ကွက်သောပြင်းထန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များကြောင်းပြသ အီး longifolia ဂျက် [မြှင့်တင်ရန်နှင့်လည်း 9-12th ရက်သတ္တပတ်လေ့လာရေးကာလအတွင်းအောင်မြင်သော crossover, mount, intromissions နှင့်သုက်စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကနှစ်ဦးစလုံး၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်64] ။ 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့အီသနောထုတ်ယူကုသမှု [coitus များ၏ကြာချိန်သက်တမ်းတိုးရေးနှင့်သုတ်ရည်ထိ၏ကွဲပြားခြားနားသောစီးရီးများအကြားဆန့်ကျင်ဘက်ကာလလျော့ကျလာခြင်းအားဖြင့်ကုသအထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်65] ။ 800 ၏အုပ်ချုပ်ရေး butanol, Methanol, ရေ, နှင့် chloroform ပိုငျး၏ mg / kg အီး longifolia သိသိသာသာထိန်းချုပ်မှု (တည်းကကုသမှုမရှိဘူး) နဲ့နှိုင်းယှဉ်အခါ uncastrated နဂိုအတိုင်းအထီးကြွက်များတွင် leavator ani ကြွက်သားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်း-နှိုးဆွ castrated နဂိုအတိုင်းအထီးကြွက်များတွင် (တည်းကကုသမှုမရှိဘူး) ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ . အီး longifolia မြှင့်တင်ရန်နှင့်လည်း 9-12th ရက်သတ္တပတ်လေ့လာရေးကာလအတွင်းအောင်မြင်သော crossover, mount, intromissions နှင့်သုက်စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကနှစ်ဦးစလုံး၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်ပြောသည်။ ၏အမြစ်များ Butanol, Methanol, ရေ, နှင့် chloroform ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ အီး longifolia တစ်ဦးအပေါ်မှီခိုထိုး-မှုများထပ်တလဲလဲ, နှင့် 30-မိလေ့လာရေးကာလအတွင်းအမြန် Flip အတွက်တိုး, ရှည်လျား Flip, နှင့်ကုသအထီးကြွက်၏စိုက်ထူခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ် penile တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်စဉ်များအတွက်သိသိသာသာတိုးထုတ်လုပ် . အီး longifolia (0.5 လက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်ယောက်ျားကြွက်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအတွက်သုံးပါတ်တိုးလာဘို့ / ကီလိုဂရမ်ဂရမ်), ယောက်ျားကြွက်များထက်ပို 50%3ရက်သတ္တပတ် posttreatment ပြီးနောက် "ညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှု" သွင်းယူနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (8 ရက်သတ္တပတ် posttreatment ပြီးနောက်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည် ကိုသာထိန်းချုပ်အထီးကြွက်၏ 40-50% လျှပ်စစ်သုတ်ရည်ထိလှောင်အိမ်ကိုသုံးပြီး) ညာဘက်ရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်  ။ 800 နဲ့ကုသအဆိုပါလူလတ်ပိုင်းအထီးကြွက်များ ၏ mg / kg အီး longifolia , anogenital investigatory အပြုအမူအတွက်တိုးခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်လက်ခံအမျိုးသမီးဆီသို့တိမ်းညွတ်လှုပ်ရှားမှုများတိုးမြှင့်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့နှင့် mounting သော်လည်းတောင်တက်အတွက်လျော့နည်းခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း, raring, နှင့် caged မြို့ရိုးပေါ်မှာရှာဖွေရေးအဖြစ်သိမ်းယူ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်အင်္ဂါ၏တိုးမြှင့်ဖြီးလိမ်းပုံများကသက်သေများနှင့်လည်းကန့်သတ်ခံထားပြသခဲ့သည်အဖြစ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကအမျိုးသမီးဆီသို့လျာထားသောတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ Self-orientation ကိုမြှင့်တင်ရန်, ဒါကြောင့်လည်းအမျိုးမျိုးပိုငျးနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကမိမိတို့၏မဆိုင်းမတွအချိန်လျော့ကျလာခြင်းအားဖြင့်လူလတ်ပိုင်းအထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးတွေကိုမြှင့်တင်ရန် အီး longifolia [69, 70].
10.7 ။ Lepidium meyenii
Lepidum meyenii Maca အဖြစ်လူသိများ Walp (Brassicaceae) အစဉ်အလာက၎င်း၏ဆီက aphrodisiac နှင့်ကလေးမွေးဖွား-တိုးမြှင့်ဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အလုပ်လုပ်သည့်စားသုံးဆီအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ hexane, Methanol နှင့် Maca ၏ chloroform ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ (၏ Subacute ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးLepidium meyenii) အမြစ်သိသိသာသာ intromission အောင်းနေချိန်နှင့် intercopulatory ကြားကာလလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါက intromission အကြိမ်ရေနှင့် copulatory ထိရောက်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ သာ hexane အစိတ်အပိုင်းသိသိသာသာအောင်းနေချိန် mount တိုးတက်နေချိန်တွင် hexane နှင့် Methanol ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ, တောင်ပေါ်မှာအကြိမ်ရေတိုးမြှင့်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ တကမ္ဘာလုံးကိုသာ hexane အစိတ်အပိုင်းသိသိသာသာတိုင်းတာသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameters များကိုအများစုတိုးတက်လာသည်။ hexane Maca ၏ Subacute ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးအများဆုံးထိရောက်စွာ [လိင်အတွေ့အကြုံအထီးကြွက်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို parameters တွေကို extract71] ။ lipidic ထုတ်ယူ၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုကနေ Lepidium meyenii ပြီးပြည့်စုံသော intromissions များ၏အရေအတွက်တိုးများနှင့်သာမန်ကြွက်များတွင်သုက်ပိုး-အပြုသဘောအမျိုးသမီး၏နံပါတ်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအထီးကြွက်များတွင်စိုက်ထူ၏ငုပ်လျှိုးနေကာလအတွက်လျော့နည်းခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ် [က, ကြွက်နှင့်ကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုမြှင့်တင်ရန်72] ။ larginine-နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်လှုပ်ရှားမှု၏တိုးတက်မှုလည်း Maca မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။ လိင်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်များတွင် Maca ၏စူးရှသောနှင့်နေ့စဉ်အုပ်ချုပ်ရေးသုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်နှင့် postejaculatory ကြားကာလအတွက်သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုထုတ်လုပ်နှင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုနာတာရှည်ကုသမှုနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားသည်။ Maca ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးစိုးရိမ်စိတ်တိုးပွားစေခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အချို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ဘူး  ။ Black က maca [ကုသမှု 42 ရက်အကြာမှာသုက်ပိုးအရေအတွက်နှင့် epididymal သုက်ပိုး Motilal ပိုမိုအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိထငျရှား74] ။ Maca လည်း Metal ခဲထိတွေ့မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်သည့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ခဲကုသမှုအဖြစ်ထိရောက်မှုကိုပြသထားသည်။ Maca [အဆင့် VIII နှင့် IX-XI နှင့် epididymal သုက်ပိုးအရေအတွက်တိုးမှုကြောင့်နေ့စဉ်သုက်ပိုးအရေအတွက်၏အရှည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် spermatogenesis ကာကွယ်ပေးသည်75] ။7နေ့ရက်ကာလအဘို့က Black Maca ၏ hydroalcoholic ထုတ်ယူ၏ ethyl acetate အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ခံတွင်းကုသမှု [အခြားအပိုငျးနဲ့နှိုင်းယှဉ် epididymal သုက်ပိုးအရေအတွက်နှင့်နေ့စဉ်သုက်ပိုးအရေအတွက်အပေါ်အများဆုံးအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့76].
လက်တွေ့လေ့လာရေး။ Maca [ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မွေးဖွားတိုးမြှင့်77, 78] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏တိုးတက်မှု pituitary သို့မဟုတ် gonadal ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများမှဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူး [79, 80] ။ Maca အန်ဒရိုဂျင် receptor များကိုသက်ဝင်မတကယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor များပိတ်ဆို့စေခြင်းငှါ [81, 82] ။ Maca aqueous ထုတ်ယူ5မှတက်ဆေးများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံဟုယူဆနိုင်ပါသည် အချို့သော 11 မှသက်ဆိုင်ရာဂရမ်ထုတ်ယူ / ကီလိုဂရမ်, ဆခြောက်သွေ့တဲ့ hypocotyls / ကီလိုဂရမ်။ မျိုးဆက်ပွားဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု 0.10 မှာလေ့လာတွေ့ရှိစေခြင်းငှါ 15.4 ကိုယ်စားပြု Maca ထုတ်ယူ၏ဂရမ်ထုတ်ယူ / ကီလိုဂရမ် 70 ၏တစ်ဦးချင်းအဘို့အခြောက်အ hypocotyls ၏ဂရမ် ကီလိုဂရမ် .
10.8 ။ Mucuna pruriens
Mucuna pruriens လင်း။ မိသားစု Leguminosae ရှည်လျားရိုးရာ Ayurvedic အိန္ဒိယဆေးဝါးများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်တစ်ဦးလူကြိုက်များအိန္ဒိယဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၏အစေ့ကနေစုစုပေါင်း alkaloids အမ် pruriens အဆိုပါ albino ကြွက်များတွင် spermatogenesis နှင့်အလေးချိန်ဝှေးစေ့၏, ဟောပြောမှုတွေတွေ့နေကျမဟုတ်သောအများနှင့်ဆီးကြိတ်တိုးမြှင့်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည် . အမ် pruriens [mounting အကြိမ်ရေ, intromission အကြိမ်ရေများနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်အတွင်းတိုးခြင်းဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့်သာမန်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှိုးဆွပေး85]. အမ် pruriens အမျိုးအနွယ်ကိုအမှုန့် [အကြိမ်ရေ mount အောင်းနေချိန် mount, intromission ကြိမ်နှုန်းနှင့်, အထီး albino ကြွက်၏ intromission အောင်းနေချိန်အပါအဝင်သိသိသာသာအမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameters တွေကို copulatory အပြုအမူတိုးတက်86] ။ ၏အီသနောကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ အမ် pruriens အမျိုးအနွယ်ကို 200 (ကအထူးသဖြင့်ဆေးထိုးမှာပုံမှန်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးထုတ်လုပ် mg / kg) ။ mounting အကြိမ်ရေ, intromission အကြိမ်ရေများနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် mounting အောင်းနေချိန်, intromission အောင်းနေချိန်, postejaculatory ကြားကာလနှင့် interintromission ကြားကာလလျော့နည်းသွား [သိသိသာသာရှိပါတယ်87]. အမ် pruriens ထိထိရောက်ရောက်ကြောင့်ကြွက်မှ ethinyl estradiol အုပ်ချုပ်ရေးမှသွေးဆောင်အဆိုပါ spermatogenic အရှုံးရပြန်လေ၏။ အဆိုပါပြန်လည်နာလန်ထူ ros အဆင့်လျှော့ချရေး, MMP ၏ပွနျလညျထူထောငျ, apoptosis ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပိုးဆဲလ်များနှင့် apoptosis ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အရေအတွက်နောက်ဆုံးတိုးကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၏အဓိကမဲဆန္ဒနယ် L-DOPA အမ် pruriens အဓိကအား prospermatogenic ဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အကောင့်  ။ ၏အမျိုးအနွယ်ကိုထုတ်ယူ၏အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အမ် pruriens ဆီးချိုကြွက်မှထုတ်ယူမကုသဘဲဆီးချိုကြွက်မှနှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တိုးတက်မှု, လိင်စိတ်နှင့်အာနိသင်, သုက်ပိုး parameters တွေကို, DSP နှင့်ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ပြသ .
လက်တွေ့လေ့လာရေး။ အဆိုပါကုသမှုနှင့်အတူ အမ် pruriens မျိုးစပါးလူအပေါငျးတို့သမထှနျးလေ့လာမှုအုပ်စုများအတွက်သုက်ပိုးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် Motilal တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထုတ်ယူ၏ကုသမှုအပေါငျးတို့သမထှနျးအုပျစုမြား၏ဟောပြောမှုတွေပလာစမာပြီးနောက် lipids, ဓါတ်တိုးဗီတာမင်နှင့်တညျ့ fructose ၏အဆင့်ဆင့်ကုသမှုပြီးနောက် lipid ပါအောက်ဆိုဒ်ထဲမှာကျဆင်းခြင်းပြီးနောက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန် oligo-zoospermic လူနာသိသိသာသာသုက်ပိုးအာရုံစူးစိုက်မှု, ဒါပေမယ့်သုက်ပိုး Motilal သူတို့ရဲ့ခဲ့သည် [astheno-zoospermic အမျိုးသားများတွင်သာမန်အဆင့်ဆင့်ပြန်မခံခဲ့ရ90]. အမ် pruriens သိသိသာသာ T က, LH, dopamine, adrenaline နှင့် noradrenaline အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်မထှနျးယောက်ျားအတွက် FSH နဲ့ PRL ၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစသိသိသာသာသုက်ပိုးအရေအတွက်နှင့် Motilal ရပြန်လေ၏။ အမ် pruriens မထှနျးလူတို့အားကုသမှု [steroidogenesis ထိန်းညှိခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်91, 92] ။ အတူကုသမှု အမ် pruriens lipid ပါအောက်ဆိုဒ်, မြင့်မားသော spermatogenesis နှင့်မထှနျးယောက်ျားကိုတိုးတက်လာသောသုက်ပိုး Motilal သိသိသာသာဘယျလိုမှမလည်းစုစုပေါင်း lipids, triglyceride, လက်စထရော, phospholipids နှင့်ဗီတာမင် A ၏အဆင့်ဆင့်တိုးတက်, C, E နှင့်မထှနျးယောက်ျား၏ဟောပြောမှုတွေပလာစမာထဲမှာ fructose တညျ့ . အမ် pruriens သိသိသာသာတိုးတက်သုက်ပိုးအရေအတွက်နှင့် Motilal နှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဟောပြောမှုတွေပလာစမာ lipid ပါအောက်ဆိုဒ်အဆင့်ဆင့် ameliorated ။ ကုသမှုလည်းမထှနျးယောက်ျား၏ဟောပြောမှုတွေပလာစမာထဲမှာပြုတ် catalase, GSH နှင့်အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်၏အဆင့်ဆင့်ပြန်၏။ ဒါဟာ [မထှနျးယောက်ျား၏ဓါတ်တိုးကာကွယ်ရေးစနစ် reactivates နှင့်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုများစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကူညီပေးသည်နှင့်သုတ်ရည်ရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်94].
10.9 ။ Tribulus ကုန်း
အဆိုပါစက်ရုံ Tribulus ကုန်း လင်း။ လူကြိုက်များသောပေါက်စပျစ်နွယ်ပင်ကဲ့သို့လူသိများ (Zygophyllaceae) တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ဖြူးနဲ့နှစ်ရှည်တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကကတည်းကက [ထိုကဲ့သို့သောဆီးရောဂါကူးစက်မှု, ရောင်ရမ်း, leucorrhoea, ဖောနှင့် ascites အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဝေဒနာတွေအပေါ်အကျိုးရှိသောတောင်းဆိုမှုများအပြင်တစ်ဦး aphrodisiac အဖြစ်မှတ်နေသည်95]. တီကုန်း ရှည်လျားသောအမျိုးမျိုးသောရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်ဆေးဝါးများ၏ရိုးရာတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယစနစ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးလူကြိုက်များသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတိုးတက်စေရန်အခိုင်အမာရှိပါသည်။ ၏အုပ်ချုပ်ရေး တီကုန်း သိုးသငယ်အထီးနှင့်အသိုးထီးမှပလာစမာ Testosterone နဲ့ spermatogenesis တိုးတက်ကောင်းမွန်  ။ ဒါဟာအစ [ဟော်မုန်း luteinizing, testosterone ဟော်မုန်းများ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကိုတွေ့97] dehydroepiandrosterone, dihydrotestosterone နှင့် dehydroepiandrosterone ဆာလဖိတ် [98, 99] ။ အတူကုသမှုအောက်ပါနယူးဇီလန်အဖြူရောင်ယုန်ထံမှရရှိသော Corpus cavernosal တစ်ရှူး တီကုန်း စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် စသည်တို့အတွက် [အမျိုးမျိုးသော pharmacological အေးဂျင့်များနှင့်လျှပ်စစ်လယ်ကိုဆွနှင့်တစ်ဦး proerectile အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်100]. တီကုန်း ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ castrated ကြွက်များ၏ကုသမှုနှင့်အတူ တီကုန်း ထုတ်ယူဆီးကျိတ်အလေးချိန်နှင့် intracavernosal ဖိအားတိုးပြသခဲ့သည်။ တောင်ပေါ်မှာအကြိမ်ရေအတွက်တိုးနှင့် intromission ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကိုတစ်ခုတိုးတက်မှုရှိ၏ [တောင်ပေါ်မှာအောင်းနေချိန်, intromission အောင်းနေချိန်နှင့် penile စိုက်ထူအညွှန်းကိန်းအတွက်လျော့နည်းကျဆင်း101, 102]. တီကုန်း ကြွက်များတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် PVN ဒေသအတွက် NADPH-ဃအပြုသဘောအာရုံခံခြင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင် receptor immunoreactivity တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ, အီစထိုဂျင်ရန်၎င်း၏ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အန်ဒရိုဂျင် receptor နှင့် NADPH-ဃအပြုသဘောအာရုံခံနှစ်ခုလုံးကိုတိုးမြှင့်ဖို့လူသိများကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ AR နှင့် NADPH-ဃအပြုသဘောအာရုံခံအတွက်လေ့လာတိုးများအတွက်ယန္တရားကြောင့်များ၏အန်ဒရိုဂျင်တိုးမြှင့်အိမ်ခြံမြေဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည် တီကုန်း . တီကုန်း ထို့အပြင် [CCSM ဆဲလ်ထဲမှာသိသိဘေ့၏ပေါင်းစပ်တိုးလာ101]. တီကုန်း ထုတ်ယူ T က, DHT နှင့် DHEAS ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု hypogonadal ပြည်နယ်အတွက်ပိုပြီးသိသာခဲ့ပါတယ်။ အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောတိုးထို့ကြောင့်တစ်ဦး aphrodisiac နှင့်အမျှ PTN အသက်အရွယ်တောင်းဆိုမှုများများအတွက်တာဝန်ရှိအချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် တီကုန်း ပညာရေး၏အမှုများကိုအလယ်အလတ်မှအပျော့စားအနေနဲ့တွဲဖက်အဖြစ်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်  ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်များလွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ဖို့ tribulus များ၏စွမ်းရည်ကို [တစ်ခု aphrodisiac အဖြစ်က၎င်း၏တောင်းဆိုချက်များများအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါ100, 102].
10.10 ။ Withania somnifera
Ashwagandha (Withania somnifera (အယ်လ်) Dunal, မိသားစု: Solanaceae) ကိုလည်းလေ့ Ayurvedic ဆေးဝါးများတွင်အသုံးပြုအိန္ဒိယဂျင်ဆင်းအဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံး adaptogen, aphrodisiac ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူလုပ်သူများအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကအလုပ်သမားကျဆင်းခြင်းမိတ်လိုက်အပြုအမူနှင့် antifertility သက်ရောက်မှုအစီရင်ခံခဲ့ကြ ဒဗလျူ somnifera ကြွက်တွေမှာပေါ်အမြစ်  ။ တစ်ဦးလိင်စိတ်တို့တွင်တခုတ်တရချွတ်ယွင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသန်စွမ်းခြင်း, penile erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသွေးဆောင်အမြစ်ထုတ်ယူ  ။ ဒါဟာအစ [အထီးကြွက်များတွင် antifertility လှုပ်ရှားမှုပြသ107] ။ ဒါပေမဲ့တချို့သိပ္ပံပညာရှင်ကွောငျးဖျောပွသ ဒဗလျူ somnifera စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းတိုက်ဖျက်ရေး၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစ [အထီးကြွက်များတွင်ရေကူး-သွေးဆောင်မျိုးဆက်ပွား endocrine အလုပ်မဖြစ်ကာကွယ်ပေးသည်108] ။ aqueous ထုတ်ယူ [ကြောင့်တိုးလာ Interstitial ဆဲလ်လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအဖြစ်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ၏ induction မှဖြစ်ရသော spermatogenesis, တိုးတက်109].
လက်တွေ့လေ့လာရေး။ အဆိုပါ oligospermic လူနာအုပ်ချုပ် Ashwagandha အမြစ်ထုတ်ယူဆကျဆံရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်ပါက spermatogenic လှုပ်ရှားမှုနဲ့သွေးရည်ကြည်ဟော်မုန်းပမာဏအတွက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်တိုးတက်မှုအတွက်ရလဒ်  ။ အတူမထှနျးယောက်ျား၏ကုသမှု Withania somnifera lipid ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်ပရိုတိန်း carbonyl အကြောင်းအရာနှင့်တိုးတက်လာသောသုက်ပိုးအရေအတွက်နှင့် Motilal inhibited ။ ဒါဟာအစဓါတ်တိုးအင်ဇိုင်းတွေ၏ဟောပြောမှုတွေပလာစမာအဆင့်ဆင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန် ဒဗလျူ somnifera အမြစ်မှုန့်5တစ်သောက်သုံးသောအတွက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ normozoospermic မထှနျးလူအား3လကြာပါ g / နေ့, စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်လျော့နည်းမှု antioxidants ၏အဆင့်ကိုတိုးတက်နှင့်တိုးတက်လာသောခြုံငုံသုတ်ရည်များနှင့်ဗီတာမင် A, C, နှင့် E နှင့် fructose တညျ့။ မထှနျးယောက်ျားအတွက် FSH နဲ့ PRL ၏သိသိသာသာသွေးရည်ကြည် T နှင့် LH တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျှော့ချအဆင့်ဆင့်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် [111, 112].
11 ။ ကောက်ချက်
အမျိုးမျိုးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မျိုးပွားမှုမမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်အခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများကလူကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သူတို့က [ဤသူတို့သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၎င်း၏အရေးယူဘို့ယန္တရားကိုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, vasodilatation, တိုးမြှင့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို, ဦးနှောက် monoamines, pituitary-gonadal ဝင်ရိုးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်အောင်ထောက်ခံပြီ, ဒါကြောင့်ထွက်အကြံပြုကြသည်113].
ဤအဟင်းသီးဟင်းရွက်အပေါ်လက်တွေ့ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်လူတွေကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့သံသယဖြစ်ကြသည်။ ရိုးရာတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ရန်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားထဲကအလုပ်မလုပ်ဖို့လက်တွေ့လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အတည်ပြုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပွငျပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးမျိုးသောလမ်းကြောင်း၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆွေးနွေးချက်ကိုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးမျိုးပုံစံများ၏ကုသမှု၏ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဇာစ်မြစ်တစ်ခုခဲမော်လီကျူးကိုရှာဖွေတဲ့မော်လီကျူးလမ်းကြောင်းအတူတက်လာရန်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
စာရေးသူတစ်ဦး Nagendra Singh က Chauhan, အမျိုးသားပါရဂူ Fellowship ပေးဘို့ကျေးဇူးတင်စကား AICTE, နယူးဒေလီ။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီစက္ကူထုတ်ဝေနှင့် ပတ်သက်. အကျိုးစီးပွားမရှိပဋိပက္ခရှိကွောငျးကိုကွားပွော။
1 ။ WHO က။ အဆိုပါမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းအမျိုးသား၏စံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, Diagnosis နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့အလက်စွဲစာအုပ် WHO က။ ကင်းဘရစ်, ဗြိတိန်: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2000 ။
2 ။ Carpentier M က, Sahpaz S က, Bailleul အက်ဖ်အပင်များနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Phytotherapy။ 2004; 3: 66-71 ။
3 ။ Singh က, G, Mukherjee က T. Herbal aphrodisiacs: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ အိန္ဒိယမူးယစ်ဆေးဝါး. 1998;35(4):175–182.
4 ။ Afolayan AJ, Yakubu MT ။ နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု options များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်. 2009;6(4):1090–1102. [PubMed]
5 ။ Noumi အီး, Zollo အမ်, ကင်မရွန်းများတွင်အသုံးပြု Lontsi ဃ Aphrodisiac အပင်။ Fitoterapia. 1998;69(2):125–134.
6 ။ အနိမျ့ W က, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Tan ကအိပ်ချ်အာရှရိုးရာဆေးဝါး။ အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကျားမဆိုင်ရာဂျာနယ်. 2007;4(3):245–250.
7 ။ အမည်မသိ။ အိန္ဒိယ၏ Ayurvedic Pharmacoepia, အပိုင်း 1-4။ နယူးဒေလီ၊ အိန္ဒိယ - အိန္ဒိယအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်မိသားစုသက်သာချောင်ချိရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ အိန္ဒိယဆေးပညာနှင့် Homeomeopathy ဌာန၊ 1999 ။
8 ။ Upadhya SC ။ Vatsyayana ၏ Kamas န္တာန်တိ။ ဘုံဘေ, အိန္ဒိယ: Taraporevala; 1961 ။
9 ။ Sharma က RK ။ (Chowkhamba Sanskrit လေ့လာရေး) ။Agnivesas Caraka Samhita, Vol ။ III ကို။ 1988; 94
10 ။ Puri HS ။ Rasayana: အသက်ရှည်ခြင်းနှင့် rejuvenation များအတွက် Ayurvedic ဟင်းသီးဟင်းရွက်။ နယူးဒေလီ, အိန္ဒိယ: စီအာစီစာနယ်ဇင်း; 2002 ။
11 ။ Bhishagratna KL ။ Sushruta Samhita။ 2nd ထုတ်ဝေ။ vol ။2။ ဗာရာဏသီ, အိန္ဒိယ: 1963 ။ (မူရင်း Sanskrit ကျမ်းစာတွင်အခြေခံပြီးတစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာပေ) ။
12 ။ Kapp B ကကာဣနအမ် arousal များ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ ခုနှစ်တွင်: Smelser N ကို, Baltes P ကို, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါလူမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွယ်စုံကျမ်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: Elsevier သိပ္ပံ; 2001 ။
13 ။ Melis MR, Argiolas အေ Neuropeptides နှင့်အတိတ်ထဲကနေပစ္စုပ္ပန်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Neurobiology အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2013; 108: 80-107 ။ [PubMed]
14 ။ Pfaus JG, Damsma, G, Nomikos GG, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယောက်ျားကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း dopamine ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက်သုတေသန. 1990;530(2):345–348. [PubMed]
15 ။ Hull က EM, Eaton RC, မောရှေဂျေ, Lorraine ဃသုတ်ရည်ထိအထီးကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ ဘဝကသိပ္ပံ. 1993;52(11):935–940. [PubMed]
16 ။ Hull က EM, ဒူ J ကို, Lorraine DS, အ medial preoptic ဧရိယာ၌ Matuszewich အယ်လ် Extracellular dopamine: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်. 1995;15(11):7465–7471. [PubMed]
17 ။ Sato Y ကို, Wada H ကို, Horita H ကို, et al ။ ကြွက်များတွင်အထီး copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်း medial preoptic ဧရိယာ၌ Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက်သုတေသန. 1995;692(1-2):66–70. [PubMed]
18 ။ Giuliano က F, penile စိုက်ထူ၏ Rampin O. ဗဟိုအာရုံကြောစည်းမျဉ်း။ Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ. 2000;24(5):517–533. [PubMed]
19 ။ Waddell TG, Ibach DM ။ ခေတ်သစ်ဓါတုဗေဒ aphrodisiacs ။ ဆေးဝါးသိပ္ပံအိန္ဒိယဂျာနယ်. 1989;51(3):79–82.
20 ။ Moncada S က, Palmer က RMJ, Higgs EA ၏။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်: ဇီဝြဖစ်စဉ်, pathophysiology နှင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ Pharmacological ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ. 1991;43(2):109–142. [PubMed]
21 ။ Snyder SH ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်: ပထမဦးဆုံး neurotransmitters ၏သစ်တစ်ခုအတန်းထဲတွင်? သိပ္ပံ. 1992;257(5069):494–496. [PubMed]
22 ။ Forstermann ဦး, Gorsky ld, Pollock JS, Schmidt က HHHW, Heller M က, ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ EDRF / NO-synthesizing အင်ဇိုင်း (များ) ၏ Murad အက်ဖ်ဒေသဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့ဇီဝရူပဗေဒသုတေသနဆက်သွယ်ရေး. 1990;168(2):727–732. [PubMed]
23 ။ Bredt DS, Hwang pm တွင်, Glatt အီး, Lowenstein ကို C, ရိဒ် RR, Snyder SH ။ ပုံတူမျိုးပွားခြင်းနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖွဲ့စည်းပုံ cytochrome P-450 reductase ဆင်တူပါသည်။ သဘာဝ. 1991;351(6329):714–718. [PubMed]
24 ။ Anderson က Ke ။ အနိမ့်ဆီးကျေးရွာအုပ်စုချောမွေ့ကြွက်သားများနှင့် penile erectile တစ်ရှူး၏ဆေးဝါးဗေဒ။ Pharmacological ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ. 1993;45(3):253–308. [PubMed]
25 ။ Kim က N ကို, Azadzoi KM, စတိန်းငါ Saenz က de Tejada ဗြဲတစ်ဦးကနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့အချက် penile Corpus cavernosum ချောမွေ့ကြွက်သားများ nonadrenergic-noncholinergic • Neurogenic disease အာရုံကြောအပန်းဖြေ mediates ။ လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂျာနယ်. 1991;88(1):112–118. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Holmquist က F, Hedlund H ကို, Andersson Ke ။ lnG-nitro မိုင်နိုအက်စစ်ဟာလူ့အထီးကျန် Corpus cavernosum ၏ Non-adrenergic non-cholinergic အပန်းဖြေဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Acta Physiologica Scandinavica. 1991;141(3):441–442. [PubMed]
27 ။ Nehra တစ်ဦးက, Colreavy က F, Khandheria ကယ်, Chandrasekaran K. Sildenafil citrate, တစ်ဦးရွေးချယ် phosphodiesterase type ကို5inhibitor: ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုတွေ။ Urology ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂျာနယ်. 2001;19(1):40–45. [PubMed]
28 ။ Achike FI, Kwan CY ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, လူ့ရောဂါများနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အချက်ပြလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်သောဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒ. 2003;30(9):605–615. [PubMed]
29 ။ Dohle ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Smit M က, Weber က RFA ကို။ အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အထီးကလေးမွေးဖွား။ Urology ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂျာနယ်. 2003;21(5):341–345. [PubMed]
30 ။ Snyder PJ ။ အန်ဒရိုဂျင်၏လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်း။ ဆေးပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1984; 35: 207-217 ။ [PubMed]
31 ။ Hull က EM, ဒူ J ကို, Lorraine DS, Matuszewich အယ်လ် testosterone, preoptic dopamine နှင့်အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိ။ ဦးနှောက်သုတေသနသတင်းလွှာ. 1997;44(4):327–333. [PubMed]
32 ။ Zvara P ကို, Sioufi R ကို, Schipper HM, LR, Brock GB ကိုစတင်။ တစ်ဦးကြွက်စိုက်ထူမော်ဒယ်: နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကမကထပြုခဲ့ erectile လှုပ်ရှားမှုတစ် testosterone ဟော်မုန်းမှီခိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 1995;7(4):209–219. [PubMed]
33 ။ Gauthaman K ကို Adaikan PG ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Tribulus ကုန်း ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide ဖော့စဖိတ်-diaphorase လှုပ်ရှားမှုနဲ့အန်ဒရိုဂျင် receptor များပေါ်မှာ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2005;96(1-2):127–132. [PubMed]
34 ။ du J ကို, Hull က EM ။ အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase နှင့် tyrosine hydroxylase အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန. 1999;836(1-2):90–98. [PubMed]
35 ။ လျူ YC, Sachs bd ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် paragigantocellular နျူကလိယထဲမှာကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင် Erectile function ကို။ neuroscience ပေးစာ. 1999;262(3):203–206. [PubMed]
36 ။ Tocharus ကို C, Jeenapongsa R ကို, Teakthong T က၏ရေရှည်ကုသမှု Smitasiri Y. အကျိုးသက်ရောက်မှု Butea superba သုက်ပိုး Motilal နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပေါ်မှာ။ Naresuan တက္ကသိုလ်မှဂျာနယ်။ 2005; 13: 11-17 ။
37 ။ Manosroi တစ်ဦးက, Sanphet K ကို Saowakon S က, Aritajat S က, Manosroi ဂျေသက်ရောက်မှုများ Butea superba ကြွက်များ၏မျိုးပွားမှုစနစ်များပေါ်မှာ။ Fitoterapia. 2006;77(6):435–438. [PubMed]
38 ။ Cherdshewasart W က, Bhuntaku P ကို, Panriansaen R ကို, Dahlan W က, Malaivijitnond အက်စ်အန်ဒရိုဂျင်ပြတ်တောက်နှင့်အဆိပ်စမ်းသပ်မှု Butea superba Roxb ။ , အထီးကြွက်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုတဲ့အစဉ်အလာပျိုးပင်။ Maturitas. 2008;60(2):131–137. [PubMed]
39 ။ Cherdshewasart W ၏ Nimsakul N. လက်တွေ့စမ်းသပ် Buten superbaerectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဖက်ဝင်အပင်များကုသမှု။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2003;5(3):243–246. [PubMed]
40 ။ Tocharus ကို C, Smitasiri Y ကို, Jeenapongsa R. Butea superba Roxb ။ ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူပိုကောင်းစေပါတယ်။ Phytotherapy သုတေသန. 2006;20(6):484–489. [PubMed]
41 ။ Chauhan NS, Dixit VK ။ ၏အီသနောထုတ်ယူ၏ Antihyperglycemic လှုပ်ရှားမှု Curculigo orchioides Gaertn ။ Pharmacognosy မဂ္ဂဇင်း။ 2007; 3: 237-240 ။
42 ။ Chauhan NS, Rao က CV ကို, Dixit VK ။ အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် Curculigo orchioides စာသိုလှောင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Fitoterapia. 2007;78(7-8):530–534. [PubMed]
43 ။ Chauhan NS, Dixit VK ။ ၏စာသိုလှောင်၏ Spermatogenic လှုပ်ရှားမှု Curculigo orchioides အထီးကြွက်များတွင် gaertn ။ သဘာဝထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးချသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 2008;1(2):26–31.
44 ။ Thakur M က, Dixit VK ။ pendiculation လှုပ်ရှားမှုများပေါ်နှင့်အထီးအတွက်စသည်တို့သုက်ပိုးအရေအတွက်အချို့ vajikaran ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်နှင့်မသန်စွမ်းသူများ. 2007;25(4):203–207.
45 ။ Thakur M က, Chauhan NS, Bhargava က S, Dixit VK ။ အထီး albino ကြွက်များတွင်အချို့သော Ayurvedic ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ aphrodisiac လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. 2009;38(6):1009–1015. [PubMed]
46 ။ Thakur M က, Loeppert R ကို, Praznik W က, Dixit VK ။ အထီးကြွက်များတွင် testicular ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသွေးဆောင်အပူပေါ်အချို့သော Ayurvedic vajikarana rasayana ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိုက်ဖက်နှင့် Integrated ဆေးပညာဂျာနယ်။ 2008; 5: 1-14 ။
47 ။ Ageel လေး, Mossa JS, Tariq M က Al-Yahya MA, Al- Said က MS ။ ရိုးရာဆေးပညာအတွက်အသုံးပြုဆော်ဒီအပင်။ Riyadh, ဆော်ဒီအာရေဗျ: သိပ္ပံသုတေသနဦးစီးဌာန, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသောရှင်ဘုရင် Abdel-Aziz ကစီးတီး; 1987 ။
48 ။ Abd el-Rahman က HA, el-Badry AA ကို, မာမွတ် OM, Harraz အက်ဖ်အေ။ ၏ aqueous ထုတ်ယူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Cynomorium coccineum ကြွက်များ၏ epididymal သုက်ပိုးပုံစံပေါ်မှာ။ Phytotherapy သုတေသန။ 1999; 13: 248-250 ။ [PubMed]
49 ။ Abdel-မာဂုပညာရှိ EM, Abdel-Rahman က HA, Harraz FM ရေ။ ၏ aqueous ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Cynomorium coccineum နှင့် Withania somnifera နု Wistar ကြွက်များတွင် testicular ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2001;75(1):1–4. [PubMed]
50 ။ Thakur M က, Dixit VK ။ အချို့အရေးကြီးသောဆေးဖက်ဝင်အပင်ပေါ်တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု Chlorophytum spp ။ Pharmacognosy ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ. 2008;2(3):168–172.
51 ။ Thakur M က, Dixit VK ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Chlorophytum borivilianum ကြွက်များ၏ androgenic & လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်။ အိန္ဒိယမူးယစ်ဆေးဝါး. 2006;43(4):300–306.
52 ။ Kenjale R ကို, Shah က R ကို, Sathaye အက်စ်သက်ရောက်မှုများ Chlorophytum borivilianum လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်သုက်ပိုးအပေါ်အထီးကြွက်များတွင်ရေတွက်။ Phytotherapy သုတေသန. 2008;22(6):796–801. [PubMed]
53 ။ Thakur M က, Bhargava က S, Praznik W က, Loeppert R ကို, Dixit VK ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Chlorophytum borivilianum hyperglycemic အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် Santapau နှင့်ဖာနန်ဒက်စ။ Integrated ဆေးပညာ၏တရုတ်ဂျာနယ်. 2009;15(6):448–453. [PubMed]
54 ။ Vyawahare NS, Kagathara VG, Kshirsagar အေဒီ, et al ။ ၏ hydroalcoholic ထုတ်ယူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Chlorophytum borivilianum သွေးဆောင်အထီးဆီးချိုကြွက် streptozotocin အတွက်ဆီးချိုသင်ျခြိုလျှော့ချအတွက်ဥ။ Pharmacognosy သုတေသန။ 2009; 1: 314-319 ။
55 ။ တရုတ်အင်္ဂလိပ် Edition ကို၏ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Pharmacopoeia။ vol ။ 1 ။ ဘေဂျင်းတရုတ်: ဓာတုစက်မှုစာနယ်ဇင်း; 2000 ။ PR စနစ်တရုတ်၏ပြည်နယ် pharmacopoeia ကော်မရှင်။
56 ။ Makarova MN, Pozharitskaya ON, Shikov AN, Tesakova SV, Makarov VG, Tikhonov VP ။ ၏ lipid-based ရပ်ဆိုင်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Epimedium koreanum Nakai ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် extract လုပ်ပါ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်။ 2007; 114: 412-416 ။ [PubMed]
57 ။ လျူ W က, Xin Z ကို, Xin H ကို, ယွမ် Y ကို, Tian L ကို, erectile function ကိုနှင့် castrated ကြွက်များတွင်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase isoforms ၏စကားရပ်အပေါ် icariin ၏ Guo Y. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2005;7(4):381–388. [PubMed]
58 ။ Ning H ကို, Xin ZC, လင်း, G, ဗာနိ, L, Lue TF, Lin က CS ။ စသည်တို့နှင့်လိုဏ်ဂူချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်များတွင်သိသိ guanosine monophosphate အဆင့်အတွက် phosphodiesterase-5 လှုပ်ရှားမှုအပေါ် icariin ၏ဆိုးကျိုးများ။ Urology. 2006;68(6):1350–1354. [PubMed]
59 ။ Jiang Z ကို, Hu B, ဝမ် J ကို, et al ။ သိသိ GMP အဆင့်ဆင့်ပေါ်နှင့် penile cavernosum အတွက် cGMP-binding cGMP-တိကျတဲ့ phosphodiesterase (PDE5) ၏ mRNA စကားရပ်အပေါ် icariin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ Huazhong တက္ကသိုလ်ဂျာနယ်။ 2006;26(4):460–462. [PubMed]
et al 60. Dell'Agli M, Galli GV, Dal Cero အီး။ icariin အနကျအဓိပ်ပါယျအားဖြင့်လူ့ phosphodiesterase-5 ၏အစွမ်းထက်တားစီး။ သဘာဝထုတ်ကုန်များ၏ဂျာနယ်. 2008;71(9):1513–1517. [PubMed]
61 ။ Xu HB, Huang က ZQ ။ Icariin စသည်တို့အတွက်လူ့ endothelial ဆဲလ်အပေါ် endothelial နိုက်ထရစ်-အောက်ဆိုဒ် synthase စကားရပ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ သွေးကြောဆေးဝါးဗေဒ. 2007;47(1):18–24. [PubMed]
62 ။ Zhang က ZB ယန် QT ။ icariin ၏ testosterone ဟော်မုန်း mimetic ဂုဏ်သတ္တိများ။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2006;8(5):601–605. [PubMed]
63 ။ Cyranoski ဃမလေးရှားသုတေသီများ Home-အရွယ်ရောက်တဲ့ Viagra အပေါ်ကြီးမားတဲ့အလောင်းအစား။ nature Medicine။ 2005; 11, ဆောင်းပါး 912 [PubMed]
64 ။ အန်းနာရီ, Sim MK ။ Eurycoma longifolia လိင်နုံအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ Pharmacal သုတေသနမော်ကွန်း. 1998;21(6):779–781. [PubMed]
65 ။ အန်းနာရီ, Sim MK ။ Eurycoma longifolia ဂျက်လိင်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်များတွင်လိင်စိတ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များ. 1997;46(4):287–290. [PubMed]
66 ။ အန်းနာရီ, Cheang HS ။ effects များ Eurycoma longifolia နှစ်ဦးစလုံး uncastrated နှင့် testosterone ဟော်မုန်း-နှိုးဆွ castrated နဂိုအတိုင်းအထီးကြွက်များတွင် laevator ani ကြွက်သားပေါ်မှာဂျက်။ Pharmacal သုတေသနမော်ကွန်း. 2001;24(5):437–440. [PubMed]
67 ။ အန်းနာရီ, Ikeda က S, Gan ek ။ အတွက် aphrodisiac များ၏အာနိသင်လှုပ်ရှားမှု၏အကဲဖြတ် Eurycoma longifolia ဂျက်။ Phytotherapy သုတေသန. 2001;15(5):435–436. [PubMed]
68 ။ အန်းနာရီ, Ngai TH ။ Eurycoma longifolia ဂျက်၏ Non-သုတ်ရည်ထိအထီးကြွက် afterchronic အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် Aphrodisiac အကဲဖြတ်။ အခြေခံအကျဆုံးနှင့်လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ. 2001;15(4):265–268. [PubMed]
69 ။ အန်းနာရီ, Lee က KL ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Eurycoma longifolia လူလတ်ပိုင်းအထီးကြွက်များတွင်တိမ်းညွတ်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ဂျက်။ အခြေခံအကျဆုံးနှင့်လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ. 2002;16(6):479–483. [PubMed]
70 ။ အန်းနာရီ, Ngai TH, Tan က TH ။ effects များ Eurycoma longifolia အသက်အလယ်တန်းအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးတွေအပေါ်ဂျက်။ Phytomedicine. 2003;10(6-7):590–593. [PubMed]
71 ။ cicero AFG, Piacente S က, ပလာဇာတစ်ခု, Sala, E, Arletti R ကို, ပီဇာ C. hexane Maca ထုတ်ယူပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် Methanol နှင့် chloroformic Maca ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူထက်ကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Andrologia. 2002;34(3):177–179. [PubMed]
72 ။ Zheng BL, သူငွေကျပ်ကင်မ် CH, et al ။ နေ lipidic ထုတ်ယူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Lepidium meyenii ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပေါ်မှာ။ Urology. 2000;55(4):598–602. [PubMed]
73 ။ Lentz တစ်ဦးက, Gravitt K ကို Carson CC ကို, Marson L ကို, Giuliano အက်ဖ်ထူးခြားသောနှင့်နာတာရှည်ထိုး lepidium meyenii အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် (Maca) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်. 2007;4(2):332–340. [PubMed]
74 ။ Gonzales ကို C, Rubio J ကို, Gasco M က, Nieto J ကို, Yucra S က, Gonzales gf ။ သုံးခု ecotypes နှင့်အတူကာလတိုနှင့်ကာလရှည်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Lepidium meyenii ကြွက်များတွင် spermatogenesis အပေါ် (MACA) ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2006;103(3):448–454. [PubMed]
75 ။ Rubio J ကို, Riqueros MI, Gasco M က, Yucra S က, Miranda S က, Gonzales gf ။ Lepidium meyenii (Maca) အထီးကြွက်များတွင်မျိုးပွား function ကိုပေါ်ဦးဆောင် acetate သွေးဆောင်-ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ အစားအစာနှင့်ဓာတုဝိသဗေဒ. 2006;44(7):1114–1122. [PubMed]
76 ။ Yucra S က, Gasco M က, Rubio J ကို, Nieto J ကို, Gonzales gf ။ Black က Maca ၏ hydroalcoholic ထုတ်ယူထံမှကွဲပြားခြားနားသောအပိုငျး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (Lepidium meyenii) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင် testicular function ကိုအပေါ်။ မွေးဖွားနှင့်မြုံ. 2008;89(5):1461–1467. [PubMed]
77 ။ Gonzalez gf, Cordova တစ်ဦးက, Vegas K သည်, Chung တစ်ဦးက, Villena တစ်ဦးက, Góñez C. Effect များ Lepidium meyenii (Maca), အရွယ်ရောက်ပြီးသူကျန်းမာအမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည်မျိုးပွားဟော်မုန်းပမာဏအပေါ် aphrodisiac နှင့်ကလေးမွေးဖွား-တိုးမြှင့် propeties နှင့်အမြစ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဂျာနယ်. 2003;176(1):163–168. [PubMed]
78 ။ Ruiz-Luna AC အ, Salazar က S, Aspajo NJ, Rubio J ကို, Gasco M က, Gonzales gf ။ Lepidium meyenii (Maca) သာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်တွေမှာအမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစားတိုးပွားစေပါသည်။ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဇီဝဗေဒနှင့်ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2005; 3, ဆောင်းပါး 16 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
79 ။ Gonzales gf, Cordova တစ်ဦးက, Gonzales ကို C, Chung တစ်ဦးက, Vegas K ကို Villena အေ Lepidium meyenii (Maca) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများတွင်သုတ်ရည် parameters တွေကိုတိုးတက်လာသည်။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2001;3(4):301–303. [PubMed]
80 ။ Gonzales gf, Cordova တစ်ဦးက, Vegas K သည်, et al ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Lepidium meyenii (MACA) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကျန်းမာအမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ၎င်း၏ပျက်ကွက်ကြားဆက်ဆံရေးပေါ်မှာ။ Andrologia. 2002;34(6):367–372. [PubMed]
81 ။ Bogani P ကို, Simonini က F, Iriti M က, et al ။ Lepidium meyenii (Maca) တိုက်ရိုက်အန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုများကွိုးစားအားထုမထားဘူး။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2006;104(3):415–417. [PubMed]
82 ။ Gonzales gf, Miranda S က, Nieto J ကို, et al ။ အနီရောင် maca (Lepidium meyenii) ကြွက်များတွင်ဆီးကျိတ်အရွယ်အစားလျှော့ချ။ eproductive ဇီဝဗေဒနှင့်ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2005; 3, ဆောင်းပါး5[PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
83 ။ Chung က F, Rubio J ကို, Gonzales ကို C, Gasco M က, Gonzales gf ။ ထိုး-တုံ့ပြန်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ Lepidium meyenii အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ testicular function ကိုနှင့်အလေးချိန်အပေါ် (Maca) aqueous ထုတ်ယူ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2005;98(1-2):143–147. [PubMed]
84 ။ Saksena S က, Dixit VK ။ စုစုပေါင်း alkaloids ၏အခန်းက္ပ Mucuna pruriens Albino ကြွက်များတွင် spermatogenesis အတွက် Baker ။ သဘာဝထုတ်ကုန်များ၏အိန္ဒိယဂျာနယ်။ 1987; 3: 3-7 ။
85 ။ အီဒီအာမင် YMN, Rehman ZS, Khan က NA ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုလိင်ပုံမှန်အထီးကြွက်များတွင်အမ် pruriens ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်အောင်။ Fitoterapial။ 1996; 67: 53-58 ။
86 ။ Kumar က AKV, Srinivasan KK ။ ၏အစေ့အ Aphrodisiac လှုပ်ရှားမှု Mucuna pruriens. အိန္ဒိယမူးယစ်ဆေးဝါး. 1994;31(7):321–327.
87 ။ Suresh S က, Prithiviraj အီး၏ Prakash အက်စ် Effect Mucuna pruriens oxidative စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်အသက်ကြွက်သုက်ပိုးအတွက်ပျက်စီးမှုကိုကမကထပြုခဲ့။ Andrology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်. 2010;33(1):22–32. [PubMed]
88 ။ Singh ကအေပီ, Sarkar S က, Tripathi M က, Rajender အက်စ် Mucuna pruriens နှင့်၎င်း၏အဓိကမဲဆန္ဒနယ် L-DOPA ros, mitochondrial အမြှေးပါးအလားအလာများနှင့် apoptosis ဆုံးရှုံးတိုက်ဖျက်ရေးအားဖြင့် spermatogenic အရှုံးပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ PLoS ONE။ 2013; 8 (1) e54655 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
89 ။ Suresh S ကို၏ Prakash အက်စ် Effect Mucuna pruriens (လင်း။ ) streptozotocin-သွေးဆောင်ဆီးချိုအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်သုက်ပိုး parameters များကိုပေါ်မှာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်. 2012;9(12):3066–3078. [PubMed]
90 ။ Mucuna ၏အဟ်မဒ် MK, မာ့ခ်ဒီ AA ကို, ရှက် KK, အစ္စလာမ်ဘာသာ N ကို, Jaiswar SP, အာမက်အက်စ် Effect ထှနျးယောက်ျား၏ဟောပြောမှုတွေပလာစမာထဲမှာသုတ်ရည်ပရိုဖိုင်းနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျး parameters တွေကိုအပေါ် pruriens ။ မွေးဖွားနှင့်မြုံ. 2008;90(3):627–635. [PubMed]
91 ။ ရှက် KK, မာ့ခ်ဒီ AA ကို, Shankwar SN, အာမက် MK ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Mucuna pruriens မထှနျးယောက်ျားအတွက်ဟော်မုန်းအဆင့်အတန်းများနှင့်သုတ်ရည်ရဲ့အရည်အသွေးပေါ်မှာ။ ပဍိသနေ္ဓတားခြင်း။ 2008; 78: p ။ 194 ။
92 ။ ရှက် KK, မာ့ခ်ဒီ AA ကို, အာမက် MK, Shankhwar SN, Rajender S က, Jaiswar SP ။ Mucuna pruriens အဆိုပါ hypothalamus-pituitary-gonadal ဝင်ရိုးအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားဖြင့်အထီးကလေးမွေးဖွားပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ မွေးဖွားနှင့်မြုံ. 2009;92(6):1934–1940. [PubMed]
93 ။ အာမက် MK, မာ့ခ်ဒီ AA ကို, ရှက် KK, အစ္စလာမ်ဘာသာ N ကို, Jaiswar SP, အာမက်အက်စ် Effect များ Mucuna pruriens သုတ်ရည်ပရိုဖိုင်းနဲ့မထှနျးယောက်ျား၏ဟောပြောမှုတွေပလာစမာထဲမှာထဲကဓာတုပစ်စညျး parameters များကိုပေါ်မှာ။ မွေးဖွားနှင့်မြုံ. 2008;90(3):627–635. [PubMed]
94 ။ ရှက် KK, မာ့ခ်ဒီ AA ကို, အာမက် MK, Jaiswar SP, Shankwar SN, Tiwari SC ။ Mucuna pruriens စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်မထှနျးအမျိုးသားများတွင်သုတ်ရည်၏အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အထောက်အထားကိုအခြေခံပြီးဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ. 2010;7(1):137–144. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
95 ။ Chopra က RN, Chopra က IC, Handa KL, Kapoor က LDUN, အယ်ဒီတာများ။ အိန္ဒိယ Chopra ကန့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများမူးယစ်ဆေးဝါး။ 2nd ထုတ်ဝေ။ ကတ္တား, အိန္ဒိယ: Dhur & Sons Private Ltd ။ ; ၁၉၅၈ ။
96 ။ Georgiev P ကို, Dimitrov M က, Tribestan ၏ Vitanov အက်စ် Effect (ထံမှ Tribulus ကုန်း) သိုးသငယ်အထီးနှင့်အသိုးထီးအတွက်ပလာစမာ Testosterone နဲ့ spermatogenesis ပေါ်မှာ။ Veterinarna Sbirka. 1988;86(3):20–22.
97 ။ Koumanov က F, Bozadjieva အီး, မူးယစ်ဆေး Tribestan ၏ Andreeva အမ်လက်တွေ့စမ်းသပ်။ Savremenna Medicina. 1982;33(4):211–215.
98 ။ Adimoelja တစ်ဦးက, Adaikan PG ။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များစက်ရုံထဲကနေ Protodioscin Tribulus ကုန်း အယ်လ် DHEA မှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 1997;9(ဆောင်းပါး S6)
99 ။ Gauthaman K ကို Adaikan PG, Prasad RNV, Goh က VHH, Ng သည် SC ။ ၏သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှအလယ်တန်းဟော်မုန်း parameters တွေကိုအတွင်းအပြောင်းအလဲများ Tribulus ကုန်း မျောက်ဝံများအတွက် extract လုပ်ပါ။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2000; 1: p ။6။
100 ။ Adaikan PG, Gauthaman K ကို Prasad RNV, Ng သည် SC ။ ၏ pharmacological သက်ရောက်မှု Proerectile Tribulus ကုန်း ယုန် Corpus cavernosum အပေါ် extract လုပ်ပါ။ ဆေးပညာစင်္ကာပူ၏အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်. 2000;29(1):22–26. [PubMed]
101 ။ Gauthaman K ကို Adaikan PG, Prasad RNV ။ ၏ Aphrodisiac ဂုဏ်သတ္တိများ Tribulus ကုန်း ပုံမှန်နှင့် castrated ကြွက်များတွင် (Protodioscin) extract လုပ်ပါ။ ဘဝကသိပ္ပံ. 2002;71(12):1385–1396. [PubMed]
102 ။ Gauthaman K ကို Ganesan က AP, Prasad RNV ။ puncturevine ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (Tribulus ကုန်း) (protodioscin) extract: တစ်ကြွက်မော်ဒယ်သုံးပြီးဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း။ အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်လိုက်ဖက်သောဆေးပညာဂျာနယ်. 2003;9(2):257–265. [PubMed]
103 ။ Gauthaman K ကို Adaikan PG ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide ဖော့စဖိတ်-diaphorase လှုပ်ရှားမှုနဲ့အန်ဒရိုဂျင် receptor များအပေါ် Tribulus မြေပြင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2005;96(1-2):127–132. [PubMed]
104 ။ Gauthaman K ကို Ganesan က AP ။ ၏ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု Tribulus ကုန်း အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ယင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို: မျောက်ဝံများ, ယုန်နှင့်ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း။ Phytomedicine. 2008;15(1-2):44–54. [PubMed]
105 ။ Garg LC, Parasar GC ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Withania somnifera ကြွက်များတွင်မျိုးပွားပေါ်မှာ။ Plantae Medica။ 1965; 13: 46-47 ။
106 ။ Ilayperuma ငါ Ratnasooriya WD, Weerasooriya TR ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Withania somnifera အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အမြစ်ထုတ်ယူ။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2002;4(4):295–298. [PubMed]
107 ။ မာလီကို PC, Chouhan PS ၏ antifertility လှုပ်ရှားမှု Chaudhary R. အကဲဖြတ် Withania somnifera အထီး albino ကြွက်များဖြစ်သည်။ မွေးဖွားနှင့်မြုံ။ 2008; 90: p ။ S18 ။
108 ။ Misra DS, Maiti RK, beras S က, Das K သည်၏စုပေါငျးထုတ်ယူ၏ Ghosh ဃကာကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု Withania somnifera, Ocimum sanctum နှင့် Zingiber officinale အထီးကြွက်များတွင်ရေကူး-သွေးဆောင်မျိုးဆက်ပွား endocrine အလုပ်မဖြစ်ပေါ်မှာ။ ဆေးဝါးဗေဒ & ကုထုံး၏အီရန်ဂျာနယ်။ 2005; 4: 110-117 ။
109 ။ Iuvone T က, Esposito, G, Capasso က F, Izzo AA ကို။ အားဖြင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ထုတ်ဖော် induction Withania somnifera macrophages ၌တည်၏။ ဘဝကသိပ္ပံ. 2003;72(14):1617–1625. [PubMed]
110 ။ Ambiye VR, Langade: D, Dongre က S, Aptikar P ကို, Kulkarni M က, Ashwagandha ၏အမြစ်ထုတ်ယူ၏ spermatogenic လှုပ်ရှားမှု Dongre အေလက်တွေ့အကဲဖြတ် (Withania somnifera) oligospermic ယောက်ျားအတွက်: တစ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ အထောက်အထားကိုအခြေခံပြီးဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ။ 2013; 2013:6pages.571420 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
111 ။ အာမက် MK, မာ့ခ်ဒီ AA ကို, ရှက် KK, et al ။ Withania somnifera မထှနျးယောက်ျား၏ဟောပြောမှုတွေပလာစမာထဲမှာမျိုးပွားဟော်မုန်းပမာဏနှင့် oxidative စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်သုတ်ရည်ရဲ့အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ မွေးဖွားနှင့်မြုံ. 2010;94(3):989–996. [PubMed]
112 ။ မာ့ခ်ဒီ AA ကို, ရှက် KK, အာမက် MK, et al ။ Withania somnifera စိတ်ဖိစီးမှု-related အထီးကလေးမွေးဖွားအတွက်သုတ်ရည်ရဲ့အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အထောက်အထားကိုအခြေခံပြီးဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ။ 2011; 2011:9pages.576962 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
113 ။ Chauhan NS, Saraf DK, Dixit VK ။ pituitary-gonadal ဝင်ရိုးအပေါ် vajikaran rasayana ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Integrated ဆေးပညာ၏ဥရောပဂျာနယ်. 2010;2(2):89–91.
114 ။ Kamtchouing P ကို, Mbongue GYF, Dimo ​​T က, Watcho P ကို, Jatsa HB, Sokeng SD က။ အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် Aframomum melegueta နှင့် Piper guineense ၏ဆိုးကျိုးများ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ. 2002;13(3):243–247. [PubMed]
115 ။ Thakur M က, Bhargava က S, Dixit VK ။ hyperglycemic အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်ညွတ် racemosus ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဇီဝဗေဒ. 2009;47(5):390–395.
116 ။ Guohua H ကို, Yanhua L ကို, Rengang M က, Dongzhi W က, Zhengzhi M က၏ဟွာ Z. Aphrodisiac ဂုဏ်သတ္တိများ Allium tuberosum မျိုးစပါး extract လုပ်ပါ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2009;122(3):579–582. [PubMed]
117 ။ Ratnasooriya WD, Jayakody JR ။ ၏ aqueous ထုတ်ယူ၏ဆိုးကျိုးများ Alpinia calcarata အထီးကြွက်များ၏မျိုးပွားမှုအရည်အချင်းကိုအပေါ်စာသိုလှောင်။ Acta Biologica Hungarica. 2006;57(1):23–35. [PubMed]
118 ။ Subramoniam တစ်ဦးက, Madhavachandran V ကို, Ravi K ကို Anuja vs. ဆင်နွယ်၏ Aphrodisiac အိမ်ခြံမြေ Argyreia nervosa. ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်မျိုးပွားဂျာနယ်။ 2007; 2: 82-85 ။
119 ။ Campos AR, Lima RCP, Jr. Uchoa DEA, Silveira ER, ဆန်းတို့စအက်ဖ်အေ, Rao က VSN ။ တစ်ဦးထံမှ alkaloidal ကြွယ်ဝတဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏ Pro ကို-erectile ဆိုးကျိုးများ Aspidosperma ulei ကြွက်တွေမှာအမြစ်အခေါက်။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2006;104(1-2):240–244. [PubMed]
120 ။ Chauhan NS, Sharma က V ကို, Dixit VK ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Asteracantha longifolia အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မျိုးစပါး။ သဘာဝကုန်ပစ္စည်းသုတေသန: ယခင်သဘာဝကုန်ပစ္စည်းပေးစာ. 2011;25(15):1423–1431. [PubMed]
121 ။ Sharma က V ကို, Thakur M က, Chauhan NS, Dixit VK ။ အထီးကြွက်များတွင် Anacyclus pyrethrum, DC ၏ဟို, aphrodisiac နှင့်မျိုးဆက်ပွားလှုပ်ရှားမှု၏အကဲဖြတ်။ Scientia Pharmaceutica. 2009;77(1):97–110.
122 ။ Sharma က V ကို, Thakur M က, Chauhan NS, Dixit VK ။ ၏ရေနံအီထုတ်ယူ၏ဆိုးကျိုးများ Anacyclus pyrethrum DC က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပေါ်မှာ။ တရုတ် Integrated ဆေးပညာဂျာနယ်. 2010;8(8):767–773. [PubMed]
123 ။ Sharma က V ကို, Boonen J ကို, က de Spiegel B, Dixit VK ။ ၏ alkylamide ကြွယ်ဝအီသနောဖြေရှင်းချက်ထုတ်ယူ၏အန်ဒရိုဂျင်နှင့် spermatogenic လှုပ်ရှားမှု Anacyclus pyrethrum DC က။ Phytotherapy သုတေသန. 2013;27(1):99–106. [PubMed]
124 ။ Tédong L ကို, Djomeni Dzeufiet DP, Dimo ​​T က, et al ။ အရွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Anacardium occidentale streptozotocin-သွေးဆောင်ဆီးချိုကြွက်များတွင်မျိုးပွား function ကိုအပေါ် L. (Anacardiaceae) hexane ထုတ်ယူ။ Phytotherapie. 2007;5(4):182–193.
125 ။ Yakubu MT, Afolayan AJ ။ ၏ aqueous ထုတ်ယူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Bulbine natalensis (Baker) အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ရပ်တ။ Andrology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်. 2009;32(6):629–636. [PubMed]
126 ။ Ramachandran က S, Sridhar Y ကိုဆမ် SKG, et al ။ ၏ Aphroidisiac လှုပ်ရှားမှု Butea frondosa Koen ။ ဟောင်း Roxb ။ အထီးကြွက်များတွင် extract လုပ်ပါ။ Phytomedicine. 2004;11(2-3):165–168. [PubMed]
127 ။ Chauhan NS, Dixit VK ။ Bryonia ၏ဆိုးကျိုးများအထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မျိုးစပါး laciniosa ။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 2010;22(3):190–195. [PubMed]
128 ။ Moundipa PF, Beboy NSE, Zelefack က F, et al ။ Basella Alba နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှင့်နွားထီးတကောင် leydig ဆဲလ် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအပေါ် hibiscus macranthus ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ၏ဆိုးကျိုးများ။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2005;7(4):411–417. [PubMed]
129 ။ Sudwan P ကို, Saenphet K ကို Aritajat S ကို၏ Sitasuwan N. အကျိုးသက်ရောက်မှု Boesenbergia rotunda (အယ်လ်) Mansf ။ အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပေါ်မှာ။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2007;9(6):849–855. [PubMed]
130 ။ အလီ ST, Rakkah ni ။ ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်နိုင်ခြေ neuro လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ mode ကို Casimiroa edulis ပုံမှန်အထီးကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ် sildenafil citrate (Viagra) ကျမ်းပိုဒ်အမြိုးအနှယျထုတ်ယူ။ ဆေးဝါးသိပ္ပံပါကစ္စတန်ဂျာနယ်. 2008;21(1):1–6. [PubMed]
131 ။ Ratnasooriya WD, ဖာနန်ဒို Tsp ။ အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းကိုအပေါ် Camellia sinensis ၏အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်ဘီယာအရက်ချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2008;118(3):373–377. [PubMed]
132 ။ Abdulwaheb M က, Makonnen အီး, Debella တစ်ဦး၏ Abebe ဃ Effect Catha edulis foresk (khat) အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် extracts ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2007;110(2):250–256. [PubMed]
133 ။ Zambléတစ်ဦးက, et al မာတင်-Nizard က F, Sahpaz S က။ ၏ Vasoactivity, ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့် aphrodisiac ဂုဏ်သတ္တိများ Caesalpinia benthamiana အမြစ်များ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2008;116(1):112–119. [PubMed]
134 ။ Sangameswaran B က၏ Jayakar ခ Anti-ဆီးချိုနှင့် spermatogenic လှုပ်ရှားမှု Cocculus hirsutus (L) diels ။ ဇီဝနည်းပညာ၏အာဖရိကန်ဂျာနယ်. 2007;6(10):1212–1216.
135 ။ Thakur M က, Chauhan NS, Sharma က V ကို, Dixit VK, Curculigo orchioides ၏ Bhargava အက်စ် Effect အထီးကြွက်များတွင် hyperglycemia-သွေးဆောင် oligospermia နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပေါ်မှာ။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 2012;24(1):31–37. [PubMed]
136 ။ Hosseinzadeh H ကို, Ziaee T က, Sadeghi အေရွှေဝါရောင်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, နှင်းပွ sativus အမည်းစက်, ထုတ်ယူနှင့်၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်မှ, သာမန်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ် safranal နှင့် crocin ။ Phytomedicine. 2008;15(6-7):491–495. [PubMed]
137 ။ Onuaguluchi, G ၏ antivenene ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောထုတ်ယူအသုံးပြုခြင်းများအတွက် Nwafor P. Pharmacological အခြေခံ Diodia scandens တစ်ဦး laxative, oxytocic အေးဂျင့်နှင့်အရှေ့ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တိုင်းရင်းဆေးအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သော aphrodisiac အဖြစ်။ Phytotherapy သုတေသန။ 1999; 13: 459-463 ။ [PubMed]
138 ။ Watcho P ကို, Wankeu-ညက M, Nguelefack တီဘီ, Tapondjou L ကို, Teponno R ကို၏ Kamanyi အေ Pro ကို-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု Dracaena arborea (ရိုင်း) လင့်ခ် (dracaenaceae) လိင်ကကြုံတွေ့အထီးကြွက်များဖြစ်သည်။ Pharmacologyonline။ 2007; 1: 400-419 ။
139 ။ Thakur M က, Dixit VK ။ ၏ Aphrodisiac လှုပ်ရှားမှု Dactylorhiza hatagirea အထီး albino ကြွက်များတွင် (D.Don) Soo ။ သက်သေအထောက်အထား-based လိုက်ဖက်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ. 2007;4(1):29–31. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
140 ။ Jagdale SP, Shimpi S က, 'Salep' '၏ Chachad ဃ Pharmacological လေ့လာမှုများ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်ဝိသဗေဒ၏ဂျာနယ်။ 2009; 3: 153-156 ။
141 ။ chiu JH, Chen က KK, Chien TM, et al ။ Epimedium brevicornum အလုပျသထုတ်ယူနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် / သိသိ guanosine monophosphate အချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ် multitargets မှတဆင့်ယုန် Corpus cavernosum ပြေစေပြီး။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 2006;18(4):335–342. [PubMed]
142 ။ Yakubu MT, Akanji MA, Oladiji ကို AT ။ ၏ aqueous ထုတ်ယူ၏ Aphrodisiac အလားအလာ Fadogia agrestis အထီး albino ကြွက်များတွင် (Schweinf ။ ထွ Hiern) ကို stem ။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2005;7(4):399–404. [PubMed]
143 ။ Zanoli P ကို, Benelli တစ်ဦးက, Rivasi M က, Baraldi ကို C, Vezzalini က F နှင့်အတူစူးရှနှင့် subchronic ကုသမှု၏ Baraldi အမ်အတိုက်အခံအကျိုးသက်ရောက်မှု Ferula hermonis အထီးကြွက်၏ copulatory အပြုအမူပေါ်မှာ။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 2003;15(6):450–455. [PubMed]
144 ။ Oluyemi Ka, Jimoh OR, Adesanya oa, Omotuyi IO, ယောရှိမင်းသည် SJ, Oyesola ဖို့။ ၏ရေနံစိမ်းအီသနောထုတ်ယူ၏ဆိုးကျိုးများ Garcinia cambogia အထီး wistar ကြွက် (များ၏မျိုးပွားမှုစနစ်အပေါ်Rattus novergicus) ဇီဝနည်းပညာ၏အာဖရိကန်ဂျာနယ်. 2007;6(10):1236–1238.
145 ။ အီဒီအာမင်တစ်ဦးက, Hamza AEA ။ ကြွက်များတွင် cisplatin-သွေးဆောင်မျိုးဆက်ပွားအဆိပ်အပေါ် Roselle နှင့်ဂျင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2006;8(5):607–612. [PubMed]
146 ။ Chaturapanich, G, Chaiyakul S က, Verawatnapakul V ကို, Pholpramool C. သက်ရောက်မှုများ Kaempferia parviflora အထီးကြွက်များတွင်မျိုးပွား parameters တွေကိုနှင့် spermatic သွေးစီးဆင်းမှုအပေါ်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ။ များပြားအောင်လုပ်ခြင်း. 2008;136(4):515–522. [PubMed]
147 ။ Chaturapanich, G, Chaiyakul S က, Verawatnapakul V ကို, Yimlamai T က၏အီသနောထုတ်ယူအားဖြင့်အထီးကြွက်များတွင် aphrodisiac လှုပ်ရှားမှု Pholpramool C. စွမ်းရည်မြှင့် Kaempferia parviflora နှင့်သင်တန်းများလေ့ကျင့်ခန်း။ Andrologia။ 2012; 44 (1 ဖြည့်စွက်): 323-328 ။ [PubMed]
148 ။ Etuk အီး, မိုဟာမက် AA ကို။ ၏ aqueous ကို stem အခေါက်မှထုတ်ယူ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကဲဖြတ် Lophira lanceolata sprague dawley ကြွက်များဖြစ်သည်။ ဆေးဝါးသိပ္ပံသုတေသနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်. 2010;1(1):28–33.
149 ။ Ilarionov ဂျေအန်ဒရိုဂျင်နှင့်ဆေးဝါးစက်ရုံ၏ aphrodisiac အရေးယူ Lithospermum arvense (ငှက်ပြောင်းဆန်) Eksperimentalna Medicina ငါ Morfologiya. 1989;28(1):28–33. [PubMed]
150 ။ Yakubu MT, Akanji MA, Oladiji ကို AT, Adesokan AA ကို။ ၏ aqueous ထုတ်ယူ၏အန်ဒရိုဂျင်အလားအလာ Massularia acuminata ( G. အဒွန်) Bullock ဟောင်း Hoyl ။ အထီး Wistar ကြွက်များတွင်ရပ်တ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2008;118(3):508–513. [PubMed]
151 ။ Watcho P ကို, Kamtchouing P ကို, Sokeng SD, et al ။ အထီးကြွက်များတွင် Mondia whitei အမြစ်များအန်ဒရိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2004;6(3):269–272. [PubMed]
152 ။ Lampiao က F, Krom: D, ဒူ Plessis အက်စ်အက်စ်။ အဆိုပါ စသည်တို့အတွက် သက်ရောက်မှုများ Mondia whitei လူ့သုက်ပိုး Motilal parameters များကိုပေါ်မှာ။ Phytotherapy သုတေသန. 2008;22(9):1272–1273. [PubMed]
153 ။ Zambléတစ်ဦးက, Sahpaz S က, Brunet ကို C, အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် keayana ၏ Bailleul အက်ဖ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Phytomedicine. 2008;15(8):625–629. [PubMed]
154 ။ Carro-ရေ့စ်က M, စေရ်ဗန်းတေ့အီး, အထီးကြွက်များတွင် aqueous ရေနံစိမ်းထုတ်ယူ tomentosa Montanoa ၏စေရ်ဗန်းတေ့-Méndez M က, Rodriguez-Manzo G. အ Aphrodisiac ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ. 2004;78(1):129–134. [PubMed]
155 ။ Tajuddin တစ်ဦးက, အာမက်က S, Latif ကတစ်ဦး, Qasmi်IA ။ ၏ 50% အီသနောကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ၏ Aphrodisiac လှုပ်ရှားမှု Myristica fragrans Houtt ။ (Nutmeg) နှင့် Syzygium aromaticum (အယ်လ်) Merr ။ & ပယ်ရီ အထီးကြွက်များတွင် (လေးညှင်းပွင့်): တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ BMC လိုက်ဖက်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ။ 2003; 3, ဆောင်းပါး6[PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
156 ။ အာမက်က S, Latif ကတစ်ဦး, Qasmi IA, အီဒီအာမင် KMY ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်အောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတစ်ဦးစမ်းသပ်လေ့လာမှု Myristica fragrans Houtt ။ (Nutmeg) BMC လိုက်ဖက်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ။ 2005; 5, ဆောင်းပါး 16 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
157 ။ Thakur M က, Dixit VK ။ ၏ fructo-oligosaccharide ကြွယ်ဝသောထုတ်ယူ၏ Ameliorative အကျိုးသက်ရောက်မှု Orchis latifolia Linn ။ hyperglycemic အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပေါ်မှာ။ လိင်နှင့်မသန်စွမ်းသူများ. 2008;26(1):37–46.
158 ။ မာဖီ ll, Lee ကတီဂျေ။ ဂျင်ဆင်း, လိင်အပြုအမူများနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2002; 962: 372-377 ။ [PubMed]
159 ။ မာဖီ ll, Cadena RS, ချားဗေ့စ်: D, Ferraro JS ။ အမေရိကန်ဂျင်ဆင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (Panax quinquefolium) ကိုကြွက်များတွင်အထီး copulatory အပြုအမူပေါ်မှာ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ. 1998;64(4):445–450. [PubMed]
160 ။ Riley AJ ။ erectile ရောဂါကုသမှုအတွက် Yohimbine ။ လက်တွေ့အလေ့အကျင့်များဗြိတိန်ဂျာနယ်. 1994;48(3):133–136. [PubMed]
161 ။ Subhan က F, ဆူလ်တန်က S, Alam W က, Dil AST ။ ၏ Aphrodisiac အလားအလာ Peganum harmala မျိုးစပါး။ Hamdard Medicus။ 1998; 41: 69-72 ။
162 ။ Kamtchouing P ကို, Fandio အားကစားရုံ, Dimo ​​T က, Jatsa HB ။ ၏အန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှု၏အကဲဖြတ် Zingiber officinale နှင့် Pentadiplandra brazzeana အထီးကြွက်များဖြစ်သည်။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2002;4(4):299–301. [PubMed]
163 ။ -Oshima M က, Gu Y. Pfaffia paniculataပလာစမာ estradiol-17 အတွက် -induced အပြောင်းအလဲများβကြွက်များတွင်အဓိကချို့ယွင်းခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်။ မျိုးပွားဂျာနယ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ. 2003;49(2):175–180. [PubMed]
164 ။ Akinola OB, Oladosu OS ကို, Dosumu ဦး။ ၏အရွက်၏အီသနောထုတ်ယူ Psidium guajava လင်း ကျန်းမာ Wistar ကြွက်များတွင်သုက်ပိုး output ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဆေးပညာ၏အာဖရိကန်ဂျာနယ်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ. 2007;36(2):137–140. [PubMed]
165 ။ ယန် WM, Chang က MS, ပန်းခြံ SK ကို။ effects များ Psoralea corylifolia ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် modulator တွေကိုကြွက်များတွင် (CREM) ဟူသောအသုံးအနှုနျးမြားနှငျ့ spermatogenesis ပေါ်မှာ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2008;117(3):503–506. [PubMed]
166 ။ Dhawan K ကို Kumar က S ကို၏အရွက်၏ Methanol ထုတ်ယူ၏ Sharma ကအေ Aphrodisiac လှုပ်ရှားမှု Passiflora incarnata လင်း။ ကြွက်တွေမှာ။ Phytotherapy သုတေသန. 2003;17(4):401–403. [PubMed]
167 ။ အိုးက MS, ယန် WM, Chang က MS, et al ။ effects များ Rubus coreanus သုက်ပိုး parameters တွေကိုနှင့်စခန်း-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် modulator တွေကို (CREM) ကြွက်ဝှေးစေ့များတွင်စကားရပ်ပေါ်မှာ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2007;114(3):463–467. [PubMed]
168 ။ Rakuambo NC, Meyer JJM, ဟူစိန်တစ်ဦးက, Huyser ကို C, Mdlalose SP, Raidani TG ။ စသည်တို့အတွက် ဆေးဖက်ဝင်အပင်အကျိုးသက်ရောက်မှုချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေနှင့်လူ့သုက်ပိုးအပေါ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2006;105(1-2):84–88. [PubMed]
169 ။ Tajuddin တစ်ဦးက, အာမက်က S, Latif ကတစ်ဦး, Qasmi်IA ။ ၏ 50% အီသနောထုတ်ယူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Syzygium aromaticum (အယ်လ်) Merr ။ & ပယ်ရီ ပုံမှန်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် (လေးညှင်းပွင့်) ။ BMC လိုက်ဖက်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ။ 2004; 4, ဆောင်းပါး 17 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
170 ။ Carro-ရေ့စ်က M, Alcazar ကို C, Ballesteros-Polvo E ကို, အ oquichpatli ၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် ejaculatory စွမ်းရည်၏ Villalobos-Peñalosa P. တိုးတက် (Senecio cardiophyllusအထီးကြွက်အတွက်) aqueous ရေနံစိမ်းထုတ်ယူ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2009;126(3):506–511. [PubMed]
171 ။ အစ္စလာမ်ဘာသာမဂ္ဂါဝပ်, Tariq က M, Ageel AM Al-Said က MS Al-Yhya လေး။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Salvia haematodes အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပေါ်မှာ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 1991;33(1-2):67–72. [PubMed]
172 ။ Ratnasooriya WD, Dharmasiri MG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အထီးကြွက်များ၏ကလေးမွေးဖွားအပေါ် Terminalia catappa မျိုးစပါးဆိုးကျိုးများ။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2000;2(3):213–219. [PubMed]
173 ။ el-Tantawy WHA, Temraz တစ်ဦးက, el-Gindi OD ။ နဲ့ကုသအထီးကြွက်များတွင်အခမဲ့သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို Tribulus alatus ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ။ Urology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘရာဇီးဂျာနယ်. 2007;33(4):554–559. [PubMed]
174 ။ Subramoniam တစ်ဦးက, Madhavachandran V ကို, Rajasekharan S ကို၏ Pushpangadan P. Aphrodisiac အိမ်ခြံမြေ Trichopus zeylanicus အထီးကြွက်တွေမှာ extract လုပ်ပါ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 1997;57(1):21–27. [PubMed]
175 ။ Padashetty လုပ် SA, Mishra SH ။ ဓါတ်တိုးအင်ဇိုင်းတွေကနေထောက်ခံအရေးယူမှုနှင့်အတူ Tricholepis glaberrima ၏ Aphrodisiac လေ့လာမှုများ။ ဆေးဝါးဇီဝဗေဒ. 2007;45(7):580–586.
176 ။ Arletti R ကို, Benelli တစ်ဦးက, Cavazzuti အီး, Scarpetta, G ၏ Bertolini အေစိတ်ကြွဆေးအိမ်ခြံမြေ Turnera diffusa နှင့် Pfaffia paniculata အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ။ Psychopharmacology. 1999;143(1):15–19. [PubMed]
177 ။ Suresh Kumar က PK, Subramoniam တစ်ဦးက, Vanda tessellata (Roxb ။ ) Hook ၏ Pushpangadan P. Aphrodisiac လှုပ်ရှားမှု။ ဟောင်းဒွန်အထီးကြွက်တွေမှာ extract လုပ်ပါ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏အိန္ဒိယဂျာနယ်. 2000;32(5):300–304.
178 ။ Chauhan NS, Sharma က V ကို, Thakur M က, Sawaya ACHF, Dixit VK ။ Pueraria tuberosa DC ကထုတ်ယူ FSH LH အဆငျ့ဆငျ့ကနေတဆင့် androgenesis နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အဆိုပါသိပ္ပံကမ္ဘာ့ဖလားဂျာနယ်။ 2013; 2013: 8 pages.780659 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
179 ။ Sharma က V ကို, Boonen J ကို, Chauhan NS, Thakur M က, က de Spiegel B, Dixit VK ။ အီသနောပန်းပွင့်ထုတ်ယူ acmella Spilanthes: LC-က MS alkylamide profile နဲ့အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Phytomedicine. 2011;18(13):1161–1169. [PubMed]
180 ။ Sharma က V ကို, Thakur M က, Dixit VK ။ ၏အီသနောကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု Pedalium murex လင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်ကုသမှုစဉ်နှင့်အပြီးအထီးကြွက်များတွင်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်တွင်အသီးအပွနှင့် sildenafil citrate ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2012;143(1):201–206. [PubMed]
181 ။ Watcho P ကို, ကျိုးနွံ WN, အဲလ်ဘတ် K ကို Carro-ရေ့စ်အမ် Dracaena arborea ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူကျောရိုးအထီးကြွက်များတွင် dopamine နဲ့ oxytocin ၏လိုလားသူ ejaculatory အကျိုးသက်ရောက်မှုနှောင့်နှေး။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2014 [PubMed]
182 ။ စန္ဒာ AK, Miegueu P ကို, Bilanda, DC, et al ။ ကျောရိုးအထီးကြွက်များတွင် Allanblackia floribunda ကို stem အခေါက်၏ Ejaculatory လှုပ်ရှားမှုများ။ ဆေးဝါးဇီဝဗေဒ. 2013;51(8):1014–1020. [PubMed]
183 ။ Kataria က S, Kaur: D, Rao က SK ကို, Khajuria RK ။ စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက် ၏ aphrodisiac ဂုဏ်သတ္တိများ Corchorus depressus လင်း။ ယုန် Corpus cavernosum ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ပုံမှန်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပေါ်မှာ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2013;148(1):210–217. [PubMed]
184 ။ JianFeng ကို C, PengYing Z ကို, ChengWei X ကို, TaoTao H ကို, YunGui B က၏ aqueous ထုတ်ယူ၏ KaoShan C. Effect Arctium lappa အယ်လ်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် (burdock) အမြစ်များ။ BMC လိုက်ဖက်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ။ 2012; 12, ဆောင်းပါး 8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
185 ။ Yakubu MT, Oyeyipo ဖို့, Quadri AL, Akanji MA ။ ၏ aqueous ထုတ်ယူ၏ဆိုးကျိုးများ Musa paradisiaca အထီးကြွက်၏ testicular function ကို parameters တွေကိုအပေါ်အမြစ်။ အခြေခံပညာနှင့်လက်တွေ့ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဆေးဝါးဗေဒ၏ဂျာနယ်. 2013;24(2):151–157. [PubMed]
186 ။ Ajiboye ဖို့, Nurudeen QO, Yakubu MT ။ လိင်ချို့ယွင်းကြွက်များတွင် Lecaniodiscus cupanioides ၏ aqueous အမြစ်ထုတ်ယူ၏ Aphrodisiac အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အခြေခံပညာနှင့်လက်တွေ့ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဆေးဝါးဗေဒ၏ဂျာနယ်. 2014;25(2):241–248. [PubMed]
187 ။ Srisuwan က S, Sattayasai J ကို, Arkaravichien T က, andrographolide နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ် semisynthetic ဆင်းသက်လာ၏ Aromdee C. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ထိုင်းဂျာနယ်။ 2009; 31: 68-71 ။
188 ။ Taha လုပ် SA, Ageel လေး, အစ္စလာမ်ဘာသာမဂ္ဂါဝပ်, Ginawi ညီလေး။ (-) - ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု cathinone, khat နေ psychoactive alkaloid (Catha edulis forsk ။ ) နှင့်ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ဖိန်းဓာတ်။ Pharmacological သုတေသန. 1995;31(5):299–303. [PubMed]
189 ။ Zanoli P ကို, Rivasi M က, Zavatti M က, Brusiani က F, Vezzalini က F ၏တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်း Baraldi အမ်လှုပ်ရှားမှု Ferula hermonis အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပေါ်မှာ။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 2005;17(6):513–518. [PubMed]
190 ။ et al Colman-Saizarbitoria T က, Boutros P ကို, Amesty တစ်ဦး။ Ferutinin ကြွက်၏ပျမ်းမျှထူးမြတ်သောအတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2006;106(3):327–332. [PubMed]
191 ။ ဝမ် X ကို, Chu က S, Qian T က, Chen က J ကို, Zhang ကဂျေ Ginsenoside Rg1 နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် / သိသိ guanosine monophosphate လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အထီး copulatory အပြုအမူပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်. 2010;7(2):743–750. [PubMed]
192 ။ Luo အဘိဓါန်မေး, Li က Z ကို, Huang က X ကို, ယန်ဂျေ, Zhang က S နဲ့, Cai Y. Lycium barbarum polysaccharides: ကြွက်ဝှေးစေ့၏အပူ-သွေးဆောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဆိုးကျိုးများနှင့် H2O2mouse ကို testicular ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ -induced DNA ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် hemicastrated ကြွက်များ၏မျိုးပွားမှု function ကိုအပေါ်အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဘဝကသိပ္ပံ. 2006;79(7):613–621. [PubMed]
193 ။ Taepongsorat L ကို, Tangpraprutgul P ကို, Kitana N ကို, Malaivijitnond အက်စ်စိတ်ကြွဆေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်သုက်ပိုးအရည်အသွေးနှင့်မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအပေါ် quercetin ၏ဆိုးကျိုးများ။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်. 2008;10(2):249–258. [PubMed]
194 ။ Benson BB, BéKro YA, MamyrbéKova-BéKroဂျာ Coulibaly wk, Ehilé EE ။ ၏အရွက်များမှထုတ်ယူစုစုပေါင်း flavonoids ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်အလားအလာအကဲဖြတ် Palisota hirsuta Thunb ။ K. Schum (Commelinaceae) သိပ္ပံသုတေသနဥရောပဂျာနယ်. 2008;22(4):533–538.
195 ။ sala M က, Braida: D, Leone အမတ်, Calcaterra P ကို, Monti က S, ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် yohimbine ၏ Gori အီးဗဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ. 1990;47(1):165–173. [PubMed]
196 ။ ပီတာ RH အ, ကော့ချ်ကို PC, Blythe BL ။ အထီးကြွက်၏ copulatory အပြုအမူတွေအပေါ် yohimbine နှင့် naloxone ၏သက်ရောက်မှု Differential ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ. 1988;102(4):559–564. [PubMed]
197 ။ Meyer JJM, Rakuambo NC, ဟူစိန် AA ကို။ ကနေဝတ္ထု xanthones Securidaca longepedunculata erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2008;119(3):599–603. [PubMed]
198 ။ Haeri S က, Minaie B, အီဒီအာမင်, G, et al ။ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Satureja khuzestanica အထီးကြွက်ကလေးမွေးဖွားအပေါ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ။ Fitoterapia. 2006;77(7-8):495–499. [PubMed]
199 ။ Tyagi RM, Aswar um, Mohan V ကို, Bodhankar SL, Zambare Gn, Thakurdesai PA ဆိုပြီး။ ၏ furostenol glycoside အစိတ်အပိုင်း၏လေ့လာမှု Tribulus terresteris ကြွက်များတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်။ ဆေးဝါးဇီဝဗေဒ. 2008;46(3):191–198.
200 ။ Estrada-Reyes R ကို, Ortiz-ဇျ P ကို, Gutierrez-Ortíz J ကို, Martinez-Mota L. Turnera diffusa ရိုင်း (Turneraceae) လိင်ကမောယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြန်လည်သက်သာ။ Ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်. 2009;123(3):423–429. [PubMed]
201 ။ Subramoniam တစ်ဦးက, Gangaprasad တစ်ဦးက, Sureshkumar PK, Radhika J ကို, Arun ကယ်။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthases မြှင့်လုပ်ဆောင်ထားတဲ့သစ်ခွထံမှတစ်ဦးကဝတ္ထု aphrodisiac ဒြပ်ပေါင်း။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 2013;25(6):212–216. [PubMed]
202 ။ ပန်းခြံ JS, ဟန် K. Yacon ထုတ်ယူနှင့်၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်မှနှင့် testosterone ဟော်မုန်းဇီဝြဖစ်၏သူတို့ရဲ့တားစီးအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ spermatogenic အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Biomolecules နှင့်ဟော်မုန်း. 2013;21(2):153–160. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]